जीवनमा प्रवेश (६) | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जीवनमा प्रवेश (६)
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५६
सत्यताको पछि लागेर मात्र व्यक्तिले स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्न सक्छ: यो मानिसहरूले जान्नु पर्ने र पूर्ण रूपमा बुझ्नु पर्ने कुरा हो। यदि तँसँग सत्यताको पर्याप्त ज्ञान छैन भने, तँ सजिलै चिप्लन र गलत बाटोमा लाग्न सक्छस्। यदि तँ जीवनमा वृद्धि हुन चाहन्छस् भने, तैंले सबै कुरामा सत्यता खोज्नुपर्छ। तैंले जे गरिरहेको भए पनि, तैँले सत्यता अनुरूप हुनका लागि ठीकसँगले व्यवहार गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, र तँभित्र त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने कुन दागहरू छन् त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ; तँसँग यी कुराहरूको स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्दछ। तैंले जे गरिरहेको भए पनि त्यसको मूल्य छ कि छैन भनेर तैंले विचार गर्नुपर्दछ। तैंले ती कुराहरू गर्न सक्छन् जसको अर्थ हुन्छ, तर तैंले ती कामहरू गर्नुहुँदैन जुन कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। तैँले गर्न सक्‍ने वा गर्न नसक्‍ने कुराहरूको विषयमा, यदि तैँले त्यसलाई त्याग्‍न सक्छस् भने, तैँले तिनलाई त्याग्‍नुपर्छ। अन्यथा, यदि तैँले केही समयसम्म ती कुराहरू गर्छस् र पछि तैंले ती छाडिदिनुपर्छ भन्‍ने थाहा पाइस् भने, चाँडो निर्णय गर, र तिनलाई तुरुन्तै छोडिदे। तैंले गर्ने सबै कुरामा तैँले यही सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ। कतिपय मानिसहरूले यो प्रश्‍न उठाउँछन्: सत्यताको खोजी गर्नु र त्यसको अभ्यास गर्नु किन नदीको उल्टो धारमा डुङ्गा ख्याउने, र यदि ख्याउन छोडियो भने त्यो पछिल्तिर बगेर जानेजस्तै धेरै गाह्रो छ? खराब र अर्थहीन कुरा गर्नु वास्तवमा किन नदीको सिधा धारमा डुङ्गालाई ख्याउनु जस्तो सजिलो हुन्छ? त्यस्तो किन हुन्छ? किनकि मानवजातिको प्रकृति नै परमेश्‍वरलाई धोका दिने हुन्छ। शैतानको प्रकृतिले मानिसभित्र प्रमुख भूमिका खेलेको छ, र यो एक प्रतिक्रियावादी शक्ति हो। निस्सन्देह, परमेश्‍वरलाई धोका दिने प्रकृति भएका मानिसहरूले उहाँलाई धोका दिने कार्यहरू गर्ने सम्‍भावना हुन्छ, र उनीहरूले सकारात्मक कार्यहरू गर्न स्वाभाविक रूपमा गाह्रो हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा मानवजातिको स्वभाव सारद्वारा निर्धारित हुन्छ। तैंले साँच्चै सत्यतालाई बुझेपछि र त्यसलाई आफैभित्रबाट प्रेम गर्न थालेपछि, तँमा सत्यतासित मिल्दोजुल्दो काम गर्ने सामर्थ्य हुनेछ। तब यो सामान्य कुरा बन्छ, र कोसिस गर्न नपर्ने र रमाइलो पनि हुन्छ, र कुनै नकारात्मक कुरा गर्नचाहिँ तँलाई ठूलो कोसिस गर्नुपर्छ भन्‍ने महसुस हुन्छ। तेरो हृदयमा सत्यताले प्रमुख भूमिका खेल्‍ने हुनाले यस्तो हुन्छ। यदि तैंले मानव जीवन र कस्तो किसिमको व्यक्ति बन्नुपर्छ—छलकपट रहीत र सिधा, इमानदार, परमेश्‍वरको सेवा गर्ने र उहाँको साक्षी दिने व्यक्ति बन्‍नुपर्छ—त्यस सम्‍बन्धी सत्यतालाई साँच्‍चै बुझिस् भने, तैँले फेरि कहिल्यै पनि उहाँको प्रतिरोध गर्ने दुष्ट कार्यहरू गर्न सक्नेछैनस्, न त तैँले कहिल्यै झूटो अगुवा, झूटो कामदार वा ख्रीष्ट विरोधीको भूमिका नै खेल्न सक्‍नेछस्। शैतानले तँलाई धोका दियो भने पनि वा कसैले तेरो खराबी गऱ्यो भने पनि, तैंले त्यो गर्नेछैनस्; जोसुकैले तँलाई करकापमा पार्ने कोसिस गरे पनि, तैँले अझै पनि त्यस तरिकाले काम गर्नेछैनस्। यदि मानिसहरूले सत्यता प्राप्त गर्छन् र सत्यता उनीहरूको जीवन बन्छ भने, उनीहरू दुष्टलाई घृणा गर्न र नकारात्मक थोकहरूलाई भित्री रूपमा घृणा गर्न सक्छन्। उनीहरूले दुष्ट काम गर्नु कठिन हुनेछ, किनकि उनीहरूको जीवनको स्वभाव परिवर्तन भएको हुन्छ र उनीहरू परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिएका हुन्छन्।
यदि तँभित्र साँच्चै सत्यता छ भने, तैँले हिँड्ने मार्ग स्वाभाविक रूपमा सही हुनेछ। सत्यताविना, दुष्टता गर्न सजिलो हुन्छ, र तेरो स्वाभाविकको बाबजुत पनि तैँले त्यो काम गर्नेछस्। उदाहरणका लागि, यदि तँभित्र अहङ्कार र घमन्ड छ भने, तैँले परमेश्‍वरको प्रतिरोध गर्नबाट आफूलाई रोक्नु असम्भव हुनेछ; तैँले उहाँको प्रतिरोध गर्न आफू बाध्य बनेको महसुस गर्नेछस्। तैंले जानी-जानी त्यसो गर्दैनस्; तैँले आफ्नो अहङ्कारी र घमण्डी प्रकृतिको वशमा परेर त्यसो गर्छस्। तँलाई तेरो अहङ्कार र घमन्डले परमेश्‍वरलाई तुच्छ ठान्ने र उहाँलाई कुनै महत्त्व नभएको व्यक्तिको रूपमा हेर्ने बनाउँछ; ती कुराले तँलाई आफैलाई उचाल्ने, निरन्तर आफैलाई प्रदर्शनमा राख्‍ने, र अन्त्यमा, परमेश्‍वरको स्थानमा बस्ने र आफ्नै गवाही दिने बनाउँछ। आखिरमा तैँले आफ्नै उपायहरू, तेरा आफ्नै विचारहरू र तेरा आफ्नै धारणाहरूलाई आराधना गर्नुपर्ने सत्यतामा परिवर्तन गर्नपट्टि लाग्छस्। हेर् आफ्‍नो अहङ्कारी र घमन्डी प्रकृतिको वशमा पर्ने मानिसहरूले कति धेरै खराबी गरेका छन्! उनीहरूका कुकर्महरूको समाधान गर्न, उनीहरूले पहिले आफ्नो प्रकृतिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। स्वभावमा परिवर्तन नगरी यो समस्याको खास समाधान ल्याउन सम्भव हुँदैन। जब तँसित परमेश्‍वरको बारेमा केही बुझाइ हुन्छ, जब तैँले आफ्नै भ्रष्टतालाई देख्न सक्छस् र अहङ्कार र घमन्डको घिनलाग्दोपन र कुरूपतालाई बुझ्छस्, तब तैँले घृणित, बिरामी, र दुःखी महसुस गर्नेछस्। तैँले परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न केही कुराहरू होसियारी साथ गर्न सक्नेछस्, अनि यसो गर्दा, सहज महसुस गर्नेछस्। तैँले सचेत बनेर परमेश्‍वरका लागि साक्षी दिन सक्नेछस्, र यसो गरेर, आनन्दित महसुस गर्नेछस्। तैंले जानी-जानी आफ्नो साँचो रूप देखाउनेछस्, तेरो कुरूपता प्रकट गर्नेछस्, अनि यसो गरेर, तैंले आफूभित्र खुशी महसुस गर्नेछस् र तैँले तेरो मनको अवस्थामा सुधार भएको महसुस गर्नेछस्। त्यसकारण, तेरो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन खोज्ने पहिलो चरण भनेको परमेश्‍वरका वचनहरू बुझ्नु र सत्यमा प्रवेश गर्नु हो। सत्यतालाई बुझेर मात्र तैंले भेद-शक्ति प्राप्त गर्न सक्छस्; समझद्वारा मात्र तँ स्थितिहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्छस्; स्थितिहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझेपछि मात्र तैँले देहलाई त्याग्न सक्छस्, अनि एक-एक कदम गर्दै परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वासमा सही मार्गमा आउन सक्छस्। सत्यताको पछि लाग्ने क्रममा मानिसहरूले कति दृढ संकल्‍प गरेका हुन्छन् त्यही कुरासँग यो जोडिएको हुन्छ। यदि कसैले साँच्चै दृढ संकल्‍प गरेको छ भने, छ महिना वा एक वर्षपछि उनीहरू सही मार्गमा हिँड्न थाल्‍नेछन्। तीन वा पाँच वर्षभित्र, उनीहरूले परिणामहरू देख्नेछन्, र उनीहरूले जीवनमा प्रगति गरिरहेका छन् भन्‍ने महसुस गर्नेछन्। यदि तँ परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस्, तर सत्यताको पछि लाग्दैनस् भने, तैँले दश वर्षसम्म कुनै परिवर्तनको अनुभव नगरी विश्‍वास गर्न सक्छस्। आखिरमा, तैंले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनेको ठीक यही हो भनी सोच्नेछस्; तँ पहिले संसारमा जसरी जिइरहेको थिइस् यो झन्डै त्यस्तै रहेछ, अनि जीवित रहनु अर्थहीन कुरा रहेछ भनी सोच्नेछस्। यसले वास्तवमा सत्यताविना, जीवन रित्तो छ भन्‍ने देखाउँछ। तैँले धर्म-सिद्धान्तका केही शब्दहरू बोल्न सक्छस् होला, तर अझै पनि असुविधा र असहज महसुस गर्नेछस्। यदि मानिसहरूमा परमेश्‍वर सम्‍बन्धी केही ज्ञान छ भने, कसरी अर्थपूर्ण जीवन जिउनुपर्छ भन्‍ने जान्दछन्, र परमेश्‍वरलाई प्रसन्न पार्ने केही कुराहरू गर्न सक्छन् भने, उनीहरूले वास्तविक जीवन यही हो, र यस तरिकाले जिउँदा मात्रै उनीहरूको जीवनको अर्थ हुन्छ, र परमेश्‍वरलाई थोरै सन्तुष्ट दिन र तृप्ति दिनका लागि यस्तै प्रकारले जिउनुपर्छ भन्‍ने महसुस गर्नेछन्। यदि उनीहरूले जानी-जानी परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न, सत्यतालाई अभ्यास गर्न, आफैलाई त्याग्न, आफ्ना विचारहरूलाई त्याग्न र परमेश्‍वरको इच्छाप्रति आज्ञाकारी र विचारशील हुन सक्छन् भने—यदि उनीहरूले यी सबै कुरा होसियार भएर गर्न सक्छन् भने—सत्यतालाई सही रूपमा अभ्यास गर्नु, र सत्यतालाई साँचो रूपले अभ्यास गर्नु भनेको यही नै हो, र यो आफ्ना कल्पनाहरूमा भर पर्ने र आफ्‍ना धर्म-सिद्धान्त र नियमहरू पालन गर्ने तिनीहरूको पहिलेको अवस्थाभन्दा फरक हुन्छ। वास्तवमा, उनीहरूले सत्यतालाई नबुझ्दा, कुनै पनि कार्य गर्नु थकाइलाग्दो हुन्छ, धर्म-सिद्धान्त र नियमहरू पालन गर्नु थकाइलाग्दो हुन्छ, र कुनै लक्ष्य नहुँदा र अन्धाधुन्ध रूपमा काम गर्दा थकाइलाग्दो हुन्छ। सत्यताद्वारा मात्र उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन्—यो झूटो कुरा होइन—र यसद्वारा, उनीहरूले सजिलै र खुसीसाथ कार्यहरू गर्न सक्छन्। यस किसिमको अवस्था भएका मानिसहरू तिनै हुन् जोसँग सत्यता हुन्छ; उनीहरू तिनै हुन् जसको स्वभाव रूपान्तरण भएको हुन्छ।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “सत्यको पछि लागेर मात्रै स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्न सकिन्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५७
प्रवेश गर्ने कार्यको खोजी गर्ने क्रममा, प्रत्येक विषयको अनुसन्धान गरिनुपर्छ। सबै विषयहरूमाथि परमेश्‍वरको वचन र सत्यअनुसार राम्ररी चिन्तन गर्नुपर्छ, यसैले कि तैँले पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको इच्छा अनुरूप तिनको सामना गर्न सक्। त्यसपछि तेरो आफ्नै इच्छाबाट उत्पन्न हुने कुराहरूलाई त्याग्न सकिन्छ। तैंले परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार कसरी काम गर्नुपर्छ भनी जान्नेछस्, र गएर ती गर्नेछस्; यस्तो लाग्नेछ, कि सबै कुराले त्यसको प्राकृतिक मार्ग लिइरहेको छ, र यो अत्यन्तै सजिलो देखिनेछ। सत्यता भएका मानिसहरूले यसरी नै काम गर्छन्। त्यसपछि तैँले अरूलाई साँच्चै तेरो स्वभाव परिवर्तन भएको छ भनी देखाउन सक्छस् र उनीहरूले तैंले निश्चित रूपमा केही राम्रा कामहरू गरेको छस्, तैंले सिद्धान्तअनुसार कामहरू गर्छस्, र तैंले सबै कुरा सही तरिकाले गर्छस् भनी देख्नेछन्। यो यस्तो व्यक्ति हो जसले सत्यलाई बुझ्दछ र जोसँग साँच्चै मानवको स्वरूप हुन्छ। निश्चय, परमेश्‍वरको वचनले मानिसमा नतिजा ल्याएको हुन्छ। मानिसहरूले सत्यतालाई साँचो रूपमा बुझेपछि, उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वका अवस्थाहरूलाई बुझ्न सक्छन्, कठिन कुराहरूको निचोड देख्न सक्छन्, र अभ्यास गर्ने उचित तरिका जान्दछन्। यदि तँ सत्यतालाई बुझ्दैनस् भने, तैँले आफ्नो अस्तित्वको अवस्थालाई बुझ्न सक्नेछैनस्। तैँले आफ्नै विरुद्धमा विद्रोह गर्न चाहन्छस्, तर त्यो कसरी गर्ने वा तैंले केको विरुद्ध विद्रोह गर्दैछस् त्यो जान्दैनस्। तँ आफ्नो स्वेच्छालाई त्याग्न चाहन्छस्, तर यदि तँ तेरो स्वेच्छा सत्यता अनुरूप छ भन्‍ने ठान्छस् भने, तँ त्यसलाई कसरी त्याग्न सक्छस्? तैंले यसलाई पवित्र आत्माले अन्तर्दृष्टि दिनुभएको छ भनेर पनि सोच्न सक्छस्, र चाहे जेसुकै भए पनि तैँले त्यसलाई त्याग्न इन्कार गर्नेछस्। यसरी, जब मानिसहरूमा सत्यता हुँदैन, तब तिनीहरूले उनीहरूका स्वेच्छाबाट, उनीहरूको मानवीय अशुद्धताहरू र असल अभिप्रायहरूबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै कुरा, उनीहरूको भ्रमित मानवीय प्रेम र मानवीय अभ्यासहरू सही छन्, र ती सत्यता अनुरूप छन् भनी सोच्ने सम्‍भावना हुन्छ। त्यसोभए, तैँले कसरी यी कुराहरूको विरोध गर्न सक्छस्? यदि तैँले सत्यतालाई वा सत्यतालाई अभ्यास गर्नुको अर्थ के हो त्यसलाई बुझ्दैनस् भने, र यदि तेरो आँखामा बादल लागेको छ र कुन बाटोतिर लाग्नुपर्छ भन्‍ने तँलाई थाहा छैन त्यसैले तँलाई ठीक लागेको कुराको आधारमा मात्र काम गर्छस् भने, तैंले गलत र त्रुटिपूर्ण केही कार्यहरू गर्नेछस्। यी कार्यहरूमध्ये केही नियमअनुसारका हुनेछन्, केही उत्साहबाट उत्पन्न भएका हुनेछन्, र केही शैतानबाट उत्पन्न भएका हुनेछन्, र तिनले बाधाहरू उत्पन्न गर्नेछन्। सत्यता नभएका मानिसहरूले यसरी काम गर्दछन्: थोरै देब्रे र त्यसपछि थोरै दाहिने; एक मिनेट सही हुने, र त्यसपछि बरालिने; जसमा कुनै पनि सटीकता हुँदैन। सत्यता नभएका मानिसहरूले काम-कुराहरूलाई मूर्ख दृष्टिकोणले हेर्छन्। त्यसरी उनीहरूले कसरी मामलाहरूलाई ठीकसँग सम्हाल्न सक्छन् र? उनीहरूले कुनै पनि समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सक्छन्? सत्यतालाई बुझ्नु सहज काम होइन। परमेश्‍वरका वचनहरूलाई बुझ्न सक्ने कुरा, सत्यताको बुझाइमा निर्भर हुँदछ, र मानिसहरूले बुझ्न सक्ने सत्यताको सीमा छ। उनीहरूले जीवनभरि परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेका भए पनि परमेश्‍वरका वचनहरू सम्बन्धी उनीहरूको बुझाई अझै पनि सीमित नै हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा अनुभवी मानिसहरू पनि बढीमा, स्पष्ट रूपमा परमेश्‍वरको विरोधका कुराहरू गर्न छोड्ने, स्पष्ट रूपमा खराब रहेका कार्यहरू गर्न छोड्ने, र कसैलाई पनि फाइदा नहुने कामहरू गर्न छोड्ने अवस्थामा मात्र पुग्‍न सक्छन्। उनीहरूले उनीहरूको कुनै पनि स्वेच्छा नमिसिएको स्थिति प्राप्त गर्ने सम्‍भावना हुन्छ। किनकि मानिसहरूले सामान्य विचारहरू गर्छन्, र उनीहरूका कतिपय विचारहरू परमेश्‍वरका वचनहरू अनुरूप हुन्छन् र स्वेच्छाको रूपमा वर्गीकरण गर्न नसकिने बुझाइको एउटा पक्ष हुन्छ। तापनि, मुख्य कुरा भनेका स्वेच्छाका ती भागहरूलाई पहिचान गर्नु हो जुन परमेश्‍वरका वचनहरूको विरुद्ध, सत्यताको विरुद्ध, र पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टिको विरुद्धमा हुन्छ। यसैले तैंले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई जान्ने प्रयास गर्नैपर्छ, र सत्यतालाई बुझेर मात्र तैँले भेद-शक्ति प्राप्त गर्न सक्छस्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५८
आफैलाई चिन्नका निम्ति, तैँले तेरा आफ्‍नै भ्रष्टताका अभिव्यक्तिहरू, तेरा आफ्नै महत्त्वपूर्ण कमजोरीहरू, तेरो स्वभाव, र तेरो प्रकृतिको सारलाई जान्नुपर्छ। तैँले तेरो दैनिक जीवनमा प्रकट हुने कुराहरू—तेरा अभिप्रायहरू, तेरा दृष्टिकोणहरू, र प्रत्येक थोकको बारेमा तेरो आचरण—तिमी घरमा भए पनि बाहिर भए पनि, तँ जब भेला हुन्छस्, जब तैँले परमेश्‍वरका वचनहरू खाँदै र पिउँदै गरिरहेको हुन्छस्, वा तैँले सामना गर्ने प्रत्येक कुराको बारेमा एक-एक गरी तँलाई सम्पूर्ण रूपमा थाहा हुनुपर्छ। यी कुराहरूद्वारा तैँले आफैलाई चिन्नुपर्छ। आफैलाई गहिरो रूपमा चिन्‍नका निम्ति तैँले परमेश्‍वरका वचनहरू लागू गर्नुपर्छ; उहाँका वचनहरूको आधारमा आफैलाई चिनेर मात्र तैँले परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्छस्। परमेश्‍वरका वचनहरूको न्याय स्वीकार गर्दा हामी दु:ख-कष्टसँग डराउनु हुँदैन, न त हामी पीडादेखि नै डराउनु हुन्छ, र परमेश्‍वरका वचनहरूले हाम्रा हृदयहरू छेड्छ भनी डराउने कुरा त परै जाओस्। परमेश्‍वरले हामीलाई कसरी न्याय गर्नुहुन्छ र कसरी सजाय दिनुहुन्छ, र हाम्रा भ्रष्ट सारहरूलाई कसरी प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँका वाणीहरू धेरै पढ्नुपर्छ। हामीले ती पढ्नैपर्छ, हामीले आफैलाई तिनको स्तरमा राख्नुपर्छ। अरूलाई तीसँग तुलना नगर्—हामीले आफैलाई ती वाणीहरूसँग तुलना गर्नुपर्छ। हामीलाई ती कुराहरूको एउटै पनि कमी छैन; हामी सबै ती समान हुन सक्छौं। यदि तँ यसमा विश्‍वास गर्दैनस् भने, गएर आफै अनुभव गर्। परमेश्‍वरका वचनहरू पढिसकेपछि, कतिपय मानिसहरूले तिनलाई आफैमा प्रयोग गर्न सक्दैनन्; उनीहरू यी वचनहरूका केही भागहरू उनीहरूको बारेमा होइनन्, तर ती अरू मानिसहरूको बारेमा हुन् भनी सोच्छन्। उदाहरणको लागि, जब परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई चरित्रहीन स्त्री र वेश्याको रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ, केही दिदी-बहिनीहरूले तिनीहरू आफू आफ्ना पतिप्रति विश्‍वासयोग्य भएका कारण त्यस्ता वचनहरू उनीहरूका बारेमा भनिएको होइन भनी विचार गर्छन्; केही दिदी-बहिनीहरू उनीहरू अविवाहित भएकाले र कहिल्यै यौन-सम्पर्क नगरेकोले त्यस्ता वचनहरू उनीहरूका निम्ति पनि होइनन् भनी सोच्छन्। केही दाजुभाइहरू यी वचनहरू केवल महिलालाई मात्र भनिएका हुन्, र उनीहरूसँग तिनको कुनै सम्बन्ध छैन भनी विचार गर्छन्; कतिपय मानिसहरू परमेश्‍वरका त्यस्ता वचनहरू सुन्नमा अप्रिय छन् भन्‍ने विश्‍वास गर्छन्, र तिनलाई स्वीकार गर्न मान्दैनन्। त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसले कतिपय अवस्थामा परमेश्‍वरका वचनहरू गलत हुन्छन् भनी भन्छन्। के यो परमेश्‍वरका वचनहरूप्रति हुनुपर्ने सही दृष्टिकोण हो? मानिसहरूले परमेश्‍वरका वचनहरूको आधारमा आफ्नै बारेमा चिन्तन गर्न सक्दैनन्। यहाँ, “चरित्रहीन स्त्रीहरू” र “वेश्याहरू” ले मानिसहरूको व्यभिचारको भ्रष्टतालाई दर्साउँछ। चाहे पुरुष होस् वा स्त्री, विवाहित होस् वा अविवाहित सबै जनामा व्यभिचारको भ्रष्टता हुन्छ—यसैले तँसँग यसको कुनै सम्बन्ध कसरी नहुन सक्छ? परमेश्‍वरका वचनहरूले मानिसहरूको भ्रष्ट स्वभावलाई प्रकट गर्दछ; चाहे पुरुष होस् वा महिला, भ्रष्टताको स्तर एकसमान छ। के यो तथ्य होइन? कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिले, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने परमेश्‍वरले बोल्नुभएका सबै वचनहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ, चाहे ती वाणीहरू सुन्नमा प्रिय लागोस् वा नलागोस्, चाहे तिनले हामीलाई तीतो अनुभव गराओस् वा मीठो अनुभव गराओस्। परमेश्‍वरका वचनहरूप्रति हाम्रो आचरण यस्तै हुनुपर्छ। यो कस्तो किसिमको आचरण हो? के यो भक्तिपूर्ण आचरण, धैर्यताको आचरण, दुःखलाई अङ्गाल्ने आचरण हो? म तिमीहरूलाई भन्छु, कि यो यीमध्ये कुनै पनि होइन। हाम्रो विश्‍वासमा, हामीले परमेश्‍वरका वचनहरू सत्य छन् भनी दृढ विश्‍वास गर्नुपर्छ। ती वास्तवमै सत्य छन्, त्यसैले हामीले तिनलाई बुद्धिमानीसाथ स्वीकार गर्नुपर्छ। चाहे हामी परमेश्‍वरको वचनलाई पहिचान गर्न वा स्वीकार गर्न सकौं वा नसकौं, त्यसप्रति हाम्रो पहिलो दृष्टिकोण भनेको त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने हुनुपर्छ। परमेश्‍वरका वचनहरूको प्रत्येक पङ्‌क्ति एक खास अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ। अर्थात्, उहाँको वाणीहरूको कुनै पङ्‌क्ति बाहिरी स्वरूपसँग सम्बन्धित हुँदैनन्, बाहिरका नियमहरूसँग वा मानिसहरूका व्यवहारको साधारण तरिकासँग सम्बन्धित हुने कुरा त परै जाओस्। ती भनाइहरू त्यस्ता हुँदैनन्। यदि तँ परमेश्‍वरले बोल्नुभएको प्रत्येक पङ्क्तिलाई सामान्य प्रकारको मानवीय व्यवहार वा बाहिरी स्वरूपको रूपमा हेर्छस् भने, तँसँग कुनै आत्मिक बुझाइ छैन र तैँले सत्यता के हो भन्‍ने बझ्दैनस्। परमेश्‍वरका वचनहरू गहन छन्। ती कसरी गहन छन्? परमेश्‍वर भन्नुहुने सबै कुरा, उहाँले प्रकट गर्नुहुने सबै कुरा, सबै मानिसका भ्रष्ट स्वभावहरू, र तिनीहरूको जीवनका सारगत कुराहरू अनि जरा गाडेर बसेका कुराहरू हुन्। ती सारगत कुराहरू हुन्, बाहिरी स्वरूपहरू होइनन्, र निश्‍चित रूपमा बाहिरी व्यवहार होइनन्। मानिसहरूलाई उनीहरूको बाहिरी स्वरूपबाट हेर्दा तिनीहरू सबै ठीकठाक देखिन सक्छन्। त्यसो भए, परमेश्‍वरले किन केही मानिसहरू दुष्टात्माहरू हुन् र केही अशुद्ध आत्माहरू हुन् भनी भन्नुहुन्छ? यो तेरो निम्ति अदृश्य विषय हो। यसैले, तैँले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई थामेर राख्नका निम्ति बाहिरी स्वरूपमा वा तैंले बाहिरबाट देख्ने कुरामा भरोसा गर्न सक्दैनस्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५९
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६०
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “मानिसको प्रकृति कसरी जान्ने” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६१
सबै मानवजाति शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएका छन्, र मानिसको स्वभाव भनेको परमेश्‍वरलाई धोका दिनु हो। तापनि, शैतानले भ्रष्ट पारिएका सबै मानिसहरूमध्ये केहीले परमेश्‍वरको काममा समर्पित हुन र सत्यतालाई स्वीकार्न सक्छन्; सत्यता प्राप्त गर्न सक्‍ने र स्वभावमा रूपान्तरण हासिल गर्न सक्‍ने यिनीहरू नै हुन्। त्यस्ता मानिसहरू पनि हुन्छन् जसले सत्यको खोजीमा ध्यान दिँदैनन्। तिनीहरू केवल धर्म-सिद्धान्तहरूलाई बुझेर सन्तुष्ट छन्; तिनीहरूले राम्रो धर्म-सिद्धान्तको बारेमा सुन्छन् र पालन गर्छन्, र त्यो बुझेपछि, तिनीहरूले केही हदसम्म आफ्‍ना कर्तव्यहरू पूरा गर्न सक्छन्। यी मानिसहरूले उनीहरूलाई भनिएको काम गर्छन् र तिनीहरूमा सामान्य मानवता हुन्छ। तिनीहरू निश्चित हदसम्म आफूलाई समर्पित गर्न, सांसारिकतालाई त्याग्न, र दुःख-कष्ट सहन इच्छुक हुन्छन्। तापनि, तिनीहरू सत्यताको सन्दर्भमा गम्भीर हुँदैनन्; तिनीहरूले कुनै पाप नगर्नु पर्याप्त हुन्छ भन्‍ने तिनीहरू विश्‍वास गर्दछन्, र सत्यताको सारलाई कहिल्यै पनि बुझ्न सक्दैनन्। यदि त्यस्ता मानिसहरू अन्त्यसम्म दृढ भई खडा हुन सक्छन् भने, उनीहरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ, तर उनीहरूले आफ्ना स्वभावमा रूपान्तरण प्राप्त गर्दैनन्। यदि तँ आफूलाई भ्रष्टताबाट शुद्धीकरण गर्न र तेरो जीवन स्वभाव बदल्न चाहन्छस् भने, तँमा सत्यताप्रति प्रेम अनि सत्यता स्वीकार गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। सत्यतालाई स्वीकार गर्नु भनेको के हो? सत्यता स्वीकार गर्नु भनेको तँसँग जे-जस्तो भ्रष्ट स्वभाव भए तापनि, वा रातो अजिङ्गरको जुनसुकै विषहरू तेरो प्रकृतिमा भए तापनि, परमेश्‍वरका वचनहरूले त्यसलाई प्रकाश पार्दा तैँले त्यसलाई स्वीकार गर्छस् र तँ ती वचनहरूमा समर्पित हुन्छस् भन्ने हो; तैँले तिनलाई विनासर्त, कुनै बहानाहरू नबनाईकन वा कुनै कुरा टिप्ने र छान्ने नगरिकनै स्वीकार गर्छस्, र तैँले उहाँले जे भन्नुहुन्छ सोको आधारमा आफैलाई चिन्छस्। परमेश्‍वरका वचनहरूलाई स्वीकार गर्नु भनेको यही हो। उहाँले जेसुकै भन्नुभए तापनि, उहाँका वाणीले जति धेरै तेरो हृदयलाई छेदन गरे तापनि, अनि उहाँले जुनसुकै वचनहरू प्रयोग गर्नुभए तापनि, उहाँले भन्नुभएका कुराहरू सत्य हुन् भने तैँले तिनलाई स्वीकार गर्न सक्छस् र ती वास्तविकतासँग मेल खान्छन् भने तैँले तिनलाई सकार्न सक्छस्। तैँले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई जति गहन रूपमा बुझे पनि तँ ती वचनहरूमा समर्पित हुन सक्छस्, र तँ पवित्र आत्माद्वारा प्रकट गरिएको अनि तेरा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूले सङ्गति गरेको ज्योतिलाई स्वीकार गर्न र त्यसमा समर्पित हुन सक्छस्। जब त्यस्तो व्यक्तिले केही हदसम्म सत्यको खोजी गरेको हुन्छ तब उसले सत्य प्राप्त गर्न सक्छ र उसले आफ्नो स्वभावको रूपान्तरण हासिल गर्न सक्छ। सत्यलाई प्रेम नगर्ने व्यक्तिहरू शालीन मानवताकै भए तापनि, जब सत्यको कुरा आउँछ, तिनीहरू भ्रमित हुन्छन् र तिनीहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदैनन्। तिनीहरूले केही सुकर्म गर्न सक्‍ने भए पनि, र तिनीहरूले परमेश्‍वरको लागि आफैलाई समर्पित गर्न सक्‍ने भए तापनि, अनि तिनीहरू त्याग गर्न सक्षम भए तापनि, तिनीहरूले स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्न सक्दैनन्। तुलनात्मक रूपमा, पत्रुसको मानवता अन्य प्रेरितहरू र तिनका दाजुभाइ-बहिनीहरूको जस्तै थियो, तर सत्यताको खोजीमा तिनी अरूभन्दा माथि उठेका थिए; येशूले भन्नुभएका सबै कुरालाई तिनले गम्भीरतासाथ मनन गरे। येशूले सोध्नुभयो, “यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?” पत्रुसले इमानदारीसाथ जबाफ दिए, “म स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई मात्र प्रेम गर्दछु, तर पृथ्वीका प्रभुलाई प्रेम गरेको छैनँ।” पछि तिनले बुझे, र सोचे, “यो सही होइन; पृथ्वीमा हुनुहुने परमेश्‍वर नै स्वर्गका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। के स्वर्ग र पृथ्वी, दुवैमा हुनुहुने परमेश्‍वर एउटै हुनुहुन्न र? यदि मैले स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्‍वरलाई मात्र प्रेम गरें भने, मेरो प्रेम वास्तविक हुँदैन; मैले पृथ्वीमा हुनुहुने परमेश्‍वरलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, तब मात्र मेरो प्रेम वास्तविक हुनेछ।” यसरी, येशूले भन्नुभएको कुरालाई विचार गरेर पत्रुसले त्यसको सटीक अर्थ बुझे। परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न, र त्यो प्रेम वास्तविक हुनका लागि, व्यक्तिले पृथ्वीमा हुनुहुने देहधारी परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नै पर्छ। अस्पष्ट र अदृश्य परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नु न त वास्तविक न व्यावहारिक नै हुन्छ, तर व्यावहारिक, देखिने परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नु सत्यता हो। येशूका वचनहरूबाट, पत्रुसले सत्यता र परमेश्‍वरको इच्छाको बुझाइ प्राप्त गरे। स्पष्ट छ, परमेश्‍वरमाथिको पत्रुसको विश्‍वास केवल सत्यताको पछि लाग्ने कार्यमा मात्रै केन्द्रित थियो; आखिरमा, तिनले व्यावहारिक परमेश्‍वर अर्थात्‌ पृथ्वीमा हुनुहुने परमेश्‍वरको प्रेम पाउन सके। पत्रुस सत्यताको खोजीमा विशेष रूपमा गम्भीर थिए। येशू तिनलाई सल्लाह दिनुहुँदा प्रत्येक पटक नै तिनले येशूका वचनहरूलाई गम्भीरताका साथ विचार गर्थे। सायद तिनले महिनौंसम्म, एक वर्ष, वा पवित्र आत्माले तिनलाई अन्तर्दृष्टि नदिऊञ्जेल धेरै वर्षसम्म मनन-विचार गर्थे र तिनले परमेश्‍वरका वचनहरूको अर्थ बुझ्थे; यसरी, पत्रुस सत्यतामा प्रवेश गरे, र पछि, तिनको जीवन स्वभाव रूपान्तरण र नवीकरण भयो। यदि व्यक्ति सत्यताको पछि लाग्दैन भने, उसले यसलाई कहिल्यै पनि बुझ्न सक्‍नेछैन। तैँले अक्षर र धर्म-सिद्धान्तहरू दस हजार पटक भन्न सक्लास्, तर ती केवल अक्षरहरू र धर्म-सिद्धान्तहरू मात्र हुनेछन्। कतिपय मानिसहरूले यति मात्र भन्छन्, “ख्रीष्ट सत्य, बाटो र जीवन हुनुहुन्छ।” यदि तैंले यी शब्दहरूलाई दस हजार पटक दोहोऱ्याइस् भने पनि, त्यो व्यर्थ हुनेछ; तैंले त्यसको अर्थ बुझेको हुँदैनस्। ख्रीष्ट सत्य, बाटो र जीवन हुनुहुन्छ भनेर किन भनिन्छ? के तैंले यस विषयमा अनुभवबाट प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बताउन सक्छस्? के तँ सत्य, बाटो र जीवनको वास्तविकतामा प्रवेश गरेको छस्? परमेश्‍वरले आफ्‍ना वचनहरू यसकारण बोल्‍नुभएको छ ता कि तिमीहरूले तिनको बारेमा अनुभव र ज्ञान प्राप्त गर्न सक; अक्षरहरू र धर्मसिद्धान्तहरूको मात्रै कुरा गर्नु व्यर्थ हो। तैंले परमेश्‍वारका वचनहरू बुझेर तँ त्यसमा प्रवेश गरिस् भने मात्र तैँले आफैलाई जान्न सक्छस्। यदि तैँले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई बुझ्दैनस् भने, तैँले आफैलाई चिन्न सक्दैनस्। तँसँग सत्यता छ भने मात्र तैँले बुझ्न सक्छस्; सत्यताविना, तैँले बुझ्न सक्दैनस्। तँसँग सत्यता छ भने मात्र, तैँले कुनै कुरालाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्नेछस्; सत्यताविना तैँले कुनै विषयलाई बुझ्न सक्दैनस्। तँसँग सत्यता छ भने मात्र तैँले आफैलाई चिन्न सक्छस्; सत्यताविना, तैँले आफूलाई चिन्न सक्दैनस्। तँसँग सत्यता छ भने मात्र तेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सक्छ, सत्यताविना तेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सक्दैन। तँसँग सत्यता छ भने मात्र तैँले परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार सेवा गर्न सक्छस्; सत्यताविना, तैँले परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार सेवा गर्न सक्दैनस्। तैँले सत्यता प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै तैँले परमेश्‍वरको आराधना गर्न सक्छस्; सत्यविना, तेरो आराधना धार्मिक संस्कारहरूभन्दा बढी अरू केही पनि हुनेछैन। यी सबै थोक परमेश्‍वरका वचनहरूबाट सत्यता प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर हुन्छन्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६२
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६३
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६४
आत्म-चिन्तन गर्नु र आफैलाई चिन्‍नुको कुञ्जी यही हो: तैँले कुनै निश्‍चित क्षेत्रमा जति धेरै राम्रो गरेको वा सही कुरा गरेको छस् भन्‍ने महसुस गर्छस्, र तैँले जति धेरै परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न सक्छस् वा निश्‍चित क्षेत्रमा घमण्ड गर्न सक्छस् भनी सोच्छस्, तब तैँले आफैलाई चिन्नु त्यति नै धेरै उचित हुन्छ र तँमा कुनै अशुद्धताहरू छन् कि भनेर, साथै तँभित्र भएका कुन-कुन कुराहरूले परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न सक्दैन सो जान्नका लागि ती क्षेत्रहरूलाई गहन रूपमा बुझ्‍नु तेरो लागि धेरै उचित हुन्छ। उदाहरणको रूपमा हामी पावललाई लिऔं। पावल विशेष रूपले जाने-बुझेका व्यक्ति थिए र तिनले आफ्नो प्रचार कार्यमा धेरै दुःख भोगे। तिनलाई धेरैले विशेष रूपमा प्रेम र सम्मान गर्थे। फलस्वरूप, धेरै काम पूरा गरेपछि, तिनका निम्ति एउटा मुकुट राखिएको हुनेछ भन्‍ने तिनलाई लाग्यो। यसले तिनलाई गलत बाटोतर्फ झन्-झन् टाढा पुऱ्यायो र अन्त्यमा तिनले परमेश्‍वरद्वारा दण्ड पाए। यदि, त्यस समयमा तिनले आफ्नै बारेमा चिन्तन र आफैलाई विश्लेषण गरेका भए, तिनले त्यस्तो सोच्ने थिएनन्। अर्को शब्दमा भन्दा, पावलले प्रभु येशूका वचनहरूमा सत्यको खोजी गर्न ध्यान दिएका थिएनन्; तिनले केवल आफ्नै विचारहरू र कल्पनाहरूमा विश्‍वास गरेका थिए। तिनले जबसम्म केही असल कुराहरू गर्छन् र असल व्यवहार देखाउँछन् तबसम्‍म परमेश्‍वरले तिनलाई स्याबासी दिनुहुनेछ र तिनलाई इनाम दिनुहुनेछ भनी तिनले सोचेका थिए। अन्त्यमा, तिनको आफ्नै धारणा र कल्पनाले तिनको आत्मालाई दृष्टिविहीन बनाएको थियो र तिनको वास्तविक अनुहार ढाकेको थियो। तापनि, मानिसहरूले यो कुरा जान्दैनथिए, र परमेश्‍वरले यो कुरा प्रकाशमा नल्याउनुभएकोले, तिनीहरूले पावललाई निरन्तर पुग्‍नु पर्ने एउटा मापदण्डको रूपमा, जिउने उदाहरणको रूपमा लिए, र तिनलाई यस्तो व्यक्ति ठाने जुन व्यक्ति जस्तो बन्‍ने इच्छा तिनीहरूले गर्थे र तिनीहरूले पछ्याउनुपर्ने व्यक्ति, र तिनीहरूले अनुकरण गर्न सक्‍ने व्यक्तिको रूपमा ठाने। पावलको यो कथाले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने सबैका लागि एउटा चेताउनीको रूपमा काम गर्दछ, जुन के हो भने जब हामी आफूले विशेष रूपले राम्रो काम गरेको महसुस गर्दछौं वा हामी कुनै विषयमा विशेष रूपमा वरदानप्राप्त छौं भनी विश्‍वास गर्छौं, वा हामी परिवर्तन हुनु आवश्यक छैन वा कुनै विषयमा सुध्रिनु आवश्यक छैन भनी सोच्छौं तब हामीले त्यसै विषयमा चिन्तन गर्ने र आफैलाई राम्ररी जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ; यो महत्त्वपूर्ण छ। किनकि तैँले आफ्‍ना जुन पक्षहरू असल छ भनी विश्‍वास गरेको हुन्छस् तिनमा वास्तवमा परमेश्‍वरलाई विरोध गर्ने कुनै कुरा छ कि छैन भनेर तैँले अवश्य नै खोजतलास गरेको, ध्यान दिएको, वा चिरफार गरेको छैनस्। उदाहरणको लागि, आफैलाई अत्यन्तै दयालु हृदय भएको ठान्‍ने कतिपय मानिसहरू पनि छन्। उनीहरूले कहिल्यै पनि अरूलाई घृणा गर्दैनन् र हानि गर्दैनन्, र उनीहरूले सधैँ ती भाइ वा बहिनीलाई सहयोगको हात बढाउँछन्, जसको परिवार खाँचोमा परेको हुन्छ, नत्र तिनीहरूको समस्या सुल्झिँदैन; उनीहरूमा ठूलो दया-भाव हुन्छ, र सबैलाई सहायता गर्न उनीहरूको शक्तिले भ्याइञ्जेल सबै कुरा गर्छन्। त्यस्तो सहायताको परिणाम के हुन्छ? उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई थाती राख्छन्, तैपनि आफैसँग अत्यन्तै खुसी भएका हुन्छन्, र उनीहरूले गर्ने सबै कुरामा अत्यन्त सन्तुष्ट हुन्छन्। यसबाहेक, उनीहरूले गरेका सबै कुरा परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न पर्याप्त छन्, र उनीहरू परमेश्‍वरका साँचो विश्‍वासीहरू हुन् भनी विश्‍वास गर्दै यसमा ठूलो गर्व गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो प्राकृतिक दयालाई कुनै फाइदा गर्ने पूँजीको रूपमा हेर्छन्, र, उनीहरूले यसलाई त्यस्तो मान्‍ने बित्तिकै, तिनीहरूले यसलाई अनिवार्य सत्यताको रूपमा हेर्छन्। वास्तवमा, उनीहरूले जे गर्छन्, ती सबै मानव भलाइ मात्र हो। तिनीहरूले अलिकति पनि सत्यताको खोजी गरेका हुँदैनन्, र तिनीहरूका सबै कामहरू व्यर्थका हुन्छन्, किनकि उनीहरूले ती मानिसका सामु गर्छन्, परमेश्‍वरको सामु होइन, र उनीहरूले परमेश्‍वरका मार्गहरू र सत्यता अनुरूप अभ्यास गर्ने कुरा त परै जाओस्। उनीहरूले गर्ने कुनै पनि कुरा सत्यताको अभ्यास हुँदैन, र कुनै पनि कुरा परमेश्‍वरका वचनहरूको अभ्यास हुँदैन, उनीहरू उहाँको इच्छाको पछि लाग्‍ने कुरा त परै जाओस्; बरु, उनीहरूले अरूलाई सहायता गर्न मानवीय दया र असल व्यवहारको प्रयोग गर्छन्। सारांशमा, उनीहरूले जे गर्छन् त्यसमा परमेश्‍वरको इच्छा खोज्दैनन्, न त उनीहरूले उहाँको मागअनुसार नै काम गर्छन्। त्यसकारण, परमेश्‍वरको स्थानबाट, मानिसका असल व्यवहारलाई निन्दा गरिन्छ, र त्यो उहाँको सम्झनाको योग्य हुँदैन।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “तिम्रा बहकिएका दृष्टिकोणहरू पहिचान गरेर मात्र तिमी आफैलाई चिन्न सक्छौ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६५
प्रकृतिमा परिवर्तन हासिल गर्ने मुख्य कुञ्जी भनेको आफ्नै प्रकृतिलाई जान्नु हो, र यो परमेश्‍वरबाट आउने प्रकाशहरू अनुरूप हुनुपर्दछ। परमेश्‍वरको वचनमा मात्र व्यक्तिले उसको आफ्नो घिनलाग्दो प्रकृतिलाई जान्न सक्छ, आफ्नै प्रकृतिमा रहेको शैतानका विभिन्न विषहरू पहिचान गर्नसक्छ, आफू मूर्ख र अज्ञानी छ भनी थाहा पाउनसक्छ, र आफ्नो प्रकृतिमा रहेका कमजोर र नकारात्मक तत्वहरूलाई चिन्न सक्छ। यी कुराहरू पूर्ण रूपमा जानेपछि, र तैँले आफैलाई साँचो रूपमा घृणा गर्न र शरीरलाई त्याग्न सकेपछि, निरन्तर परमेश्‍वरको वचन पूरा गरेपछि, र पवित्र आत्मा र परमेश्‍वरको वचनमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुने इच्छा गरेपछि मात्र तँ पत्रुसको बाटोमा हिँड्न थालेको हुनेछस्। परमेश्‍वरको अनुग्रहविना र पवित्र आत्माको ज्ञान र निर्देशनविना यस मार्गमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसहरूसँग सत्यता छैन र तिनीहरूले आफैलाई धोका दिन सक्दैनन्। पत्रुसको सिद्धताको बाटो हिँड्ने कार्य मुख्य रूपमा दृढ संकल्‍प लिने, विश्‍वास गर्ने र परमेश्‍वरमा भरोसा राख्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यसबाहेक, व्यक्ति पवित्र आत्माको कामप्रति समर्पित हुनुपर्छ; सबै कुरामा, व्यक्तिले परमेश्‍वरको वचनविना केही पनि गर्न सक्दैन। मुख्य पक्षहरू यिनै हुन्, जसमध्ये कुनै पनि कुरालाई उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन। अनुभवद्वारा आफैलाई चिन्नु धेरै कठिन छ; पवित्र आत्माको कामविना, यसमा प्रवेश गर्न धेरै गाह्रो छ। पत्रुसको मार्गमा हिँड्नको लागि, व्यक्तिले आफूलाई चिन्‍न र आफ्‍नो स्वभाव परिवर्तन गर्ने कर्मामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। पावलको मार्ग जीवनको खोजी गर्ने वा आत्म-ज्ञानमा केन्द्रित गर्ने मार्ग थिएन; तिनले विशेष गरी काम गर्न र यसको प्रभाव र गतिमा ध्यान दिए। तिनको प्रेरणा भनेको तिनको काम र कष्टको बदलीमा परमेश्‍वरको आशिष् प्राप्त गर्नु, र परमेश्‍वरबाट इनाम प्राप्त गर्नुथियो। यो प्रेरणा गलत थियो। पावलले जीवनमा ध्यान केन्द्रित गरेनन्, न त तिनले स्वभाव परिवर्तन गर्नुमा नै कुनै महत्त्व दिए; तिनले केवल इनाममा ध्यान दिए। तिनका लक्ष्यहरू गलत भएकाले तिनले हिँडेको बाटो पनि अवश्य नै गलत थियो। यो तिनको अहङ्कारी र घमण्डी स्वभावले ल्याएको थियो। स्पष्टै छ, पावलसँग कुनै सत्यता थिएन, न त तिनीसँग कुनै विवेक वा तर्क नै थियो। मानिसहरूलाई बचाउने र परिवर्तन गर्ने क्रममा परमेश्‍वरले तिनीहरूका स्वभाव परिवर्तन गर्नुहुन्छ। उहाँको वचनको उद्देश्य भनेको परिवर्तन भएको स्वभाव प्राप्त गरेपछि प्राप्त हुने परिणाम र परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने, उहाँलाई स्वीकार गर्ने, र सामान्य तरिकामा उहाँको आराधना गर्ने क्षमताको नतिजा मानिसहरूमा हासिल गर्नु हो। परमेश्‍वरका वचनहरू र उहाँको कार्यको उद्देश्य यही हो। पावलको खोजी गर्ने तरिका प्रत्यक्ष रूपमै परमेश्‍वरको इच्छाको उल्लङ्घनमा र विरोधमा थियो; त्यो पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको इच्छा विपरीत थियो। तापनि, पत्रुसको खोजी गर्ने तरिका पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप थियो, र परमेश्‍वरले मानवजातिमा प्राप्त गर्न चाहनुहुने नतिजा त्यही हो। त्यसैले पत्रुसको मार्ग आशिषित छ र यसले परमेश्‍वरको प्रशंसा प्राप्त गर्दछ। पावलको मार्गले परमेश्‍वरको इच्छा उल्लङ्घन गर्ने हुनाले, परमेश्‍वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ र सराप दिनुहुन्छ। पत्रुसको बाटोमा हिँड्नका निम्ति व्यक्तिले परमेश्‍वरको इच्छालाई जान्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिले उहाँको वचनद्वारा उहाँको इच्छालाई पूर्ण रूपले बुझ्न सक्छ भने—जसको अर्थ परमेश्‍वरले मानिसबाट के चाहनुहुन्छ र अन्ततः उहाँले कुन नतिजा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्‍नु हो—अनि मात्र आफूले कुन बाटो पछ्याउनुपर्छ भनेर उसले सही रूपले बुझ्न सक्छ। यदि तँ पत्रुसको मार्गलाई पूर्ण रूपमा बुझ्दैनस्, र केवल यसलाई पछ्याउन मात्र चाहन्छस् भने, तँ त्यसमा हिँड्न सक्‍नेछैनस्। अर्को शब्दमा भन्दा, तैँले धेरै सिद्धान्तहरू जानेको हुनसक्छस्, तर अन्त्यमा तँ वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्‍नेछैनस्। तैँले सतही प्रवेश गरे तापनि तैँले कुनै पनि वास्तविक परिणाम प्राप्त गर्न सक्‍नेछैनस्।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “आफैलाई चिन्नु भनेको मुख्य रूपले मानव प्रकृतिबारे जान्नु हो” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६७
संक्षिप्तमा भन्दा, आफ्नो विश्‍वासमा पत्रुसको मार्गमा हिँड्नु भनेको सत्यता खोजी गर्ने बाटोमा हिँड्नु हो, जुन आफैलाई साँचो रूपमा चिन्ने र आफ्नो स्वभाव बदल्ने बाटो पनि हो। पत्रुसको मार्गमा हिँडेर मात्र व्यक्ति परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने बाटोमा हुनेछ। पत्रुसको मार्गमा वास्तवमा कसरी हिँड्ने, साथसाथै यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने बारेमा व्यक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो, व्यक्तिले आफ्ना अभिप्रायहरू, अनुचित खोजीहरू, र परिवार तथा आफ्नो देहका सबै कुराहरू समेतलाई पन्छाउनुपर्छ। व्यक्ति सम्पूर्ण हृदयले समर्पित हुनुपर्छ; व्यक्तिले पूर्ण रूपमा आफूलाई परमेश्‍वरका वचनहरूमा समर्पित गर्नुपर्छ, परमेश्‍वरका वचनहरू खान र पिउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, सत्यताको खोजी गर्न अनि परमेश्‍वरका वचनहरूमा उहाँका अभिप्रायहरूको खोजी गर्न एकाग्र हुनुपर्छ, र हरेक कुरामा परमेश्‍वरको इच्‍छा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो कुरा अभ्यासको सबैभन्दा आधारभूत र महत्वपूर्ण विधि हो। पत्रुसले येशूलाई भेटेपछि यही नै गरेका थिए, र यसरी अभ्यास गरेर मात्रै व्यक्तिले सर्वोत्तम नतिजाहरू हासिल गर्न सक्छ। परमेश्‍वरका वचनहरूमा सम्पूर्ण हृदयसहितको समर्पणतामा मुख्यतया सत्यता खोजी गर्ने, परमेश्‍वरका वचनहरूमा उहाँका अभिप्रायहरूको खोजी गर्ने, परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्न ध्यान केन्द्रित गर्ने, र परमेश्‍वरका वचनहरूबाट थप सत्यता बुझ्ने र प्राप्त गर्ने कुराहरू पर्दछन्। उहाँका वचनहरू पढ्दा पत्रुसले धार्मिक सिद्धान्तहरू बुझ्नमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिएनन्, तिनले धार्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा त परै जाओस्; बरु, तिनले सत्यताको बोध गर्न र परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्न, साथसाथै उहाँको स्वभाव र उहाँको प्रेमिलोपनको बुझाइ हासिल गर्न एकाग्र भए। पत्रुसले परमेश्‍वरका वचनहरूबाट मानिसका विविध भ्रष्ट अवस्थाहरू, र साथसाथै मानिसको भ्रष्ट प्रकृति र वास्तविक कमजोरी बुझ्न पनि प्रयास गरे र यसरी तिनले उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न मानिसको लागि परमेश्‍वरका आवश्यक मापदण्डहरूका सबै पक्षहरू पूरा गरे। पत्रुससँग परमेश्‍वरका वचनहरू पालना गर्ने धेरै सही अभ्यासहरू थिए; यो कुरा परमेश्‍वरका इच्छा अनुरूपको थियो र व्यक्तिले परमेश्‍वरको कामको अनुभव गर्दै सहकार्य गर्नसक्ने सर्वोत्तम शैली यही नै थियो। परमेश्‍वरबाट सयौं परीक्षाहरू सामना गर्दा पत्रुसले आफूलाई परमेश्‍वरले गर्नुहुने मानिसको न्यायका हरेक वचनहरू, मानिसको बारेमा परमेश्‍वरको गर्नुभएको प्रकाशका हरेक वचन, अनि मानिसले पूरा गर्नुपर्ने उहाँका मागहरूका हरेक वचनसँग कठोर रूपले दाँजेर जाँच गरे र ती वचनहरूको अर्थ बोध गर्न लागिपरे। येशूले भन्नुभएका हरेक वचनहरूलाई इमान्दारीपूर्वक चिन्तन गर्ने र याद गर्ने प्रयास तिनले गरे, र राम्रो नतिजा हासिले गरे। यस शैलीको अभ्यासद्वारा तिनले परमेश्‍वरका वचनहरूबाट आफ्नै बारेमा बुझाइ हासिल गर्न सके, र तिनले मानिसका विविध भ्रष्ट अवस्थाहरूको बुझाइ मात्र होइन, बरु तिनले त मानिसको सार, प्रकृति र विविध कमजोरीहरूको बारेमा समेत बुझे। आफूलाई साँचो रूपमा बुझ्नु भनेकै यही हो। परमेश्‍वरका वचनहरूबाट, पत्रुसले आफ्नो बारेमा साँचो बुझाइ मात्र हासिल गरेनन्, बरु तिनले त परमेश्‍वरका वचनहरूमा व्यक्त गरिएका कुराहरू—परमेश्‍वरको धर्मी स्वभाव, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ, आफ्नो कामको लागि परमेश्‍वरको इच्छा, मानवजातिप्रति उहाँका मागहरू—यी वचनहरूबाट तिनले परमेश्‍वरलाई पूर्ण रूपले चिने। तिनले परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँको सारलाई चिने; तिनले परमेश्‍वरसँग के छ र उहाँ को हुनुहुन्छ, र साथसाथै परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन र मानिसले पूरा गर्नुपर्ने उहाँका मागहरूलाई जाने र बुझे। त्यतिखेर परमेश्‍वर आजभोली बोल्नुभए जति बोल्नुहुन्‍नथियो, तापनि पत्रुसमा यी पक्षहरूको नतिजा हासिल भयो। यो एकदमै विरलै हुने र अमूल्य कुरा थियो। पत्रुसले सयौं परीक्षाहरू भोगे, तर तिनले व्यर्थमा कष्ट सहेनन्। तिनले परमेश्‍वरका वचनहरू र कामबाट आफूले आफैलाई मात्र चिनेनन्, बरु तिनले त परमेश्‍वरलाई समेत चिने। यसको साथै, तिनले परमेश्‍वरका वचनहरूभित्र रहेका मानवजातिले पूरा गर्नुपर्ने परमेश्‍वरका मागहरूको बारेमा ध्यान केन्द्रित गरे। मानिसले परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने जुनसुकै पक्षहरू नै किन नहोस्, यी सबै पक्षहरूमा ठूलो प्रयत्न गर्न र पूर्ण स्पष्टता हासिल गर्न पत्रुस सक्षम भए; यो कुरा तिनको आफ्नै प्रवेशको सवालमा पनि अत्यन्तै फाइदाजनक थियो। परमेश्‍वरले जेसुकैको बारेमा बोल्नुभएको भए तापनि, ती वचनहरू तिनको जीवन बन्न सकिञ्‍जेल र ती सत्यताको स्वामित्वमा रहुञ्‍जेल, पत्रुस तिनलाई कुँदेर आफ्नो हृदयमा राख्न तथा तिनलाई बारम्बार चिन्तन र सराहना गर्न सक्षम भए। येशूका वचनहरू सुनेपछि, तिनले ती वचनहरूलाई हृदयमा राख्न सके, जसले तिनले विशेष रूपमा परमेश्‍वरका वचनहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए भन्ने देखाउँछ र तिनले अन्त्यमा सच्चा रूपमै नतिजा हासिल गरे। यसको मतलब, तिनले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई स्वतन्त्र पूर्वक व्यवहारमा उतार्न, सत्यतालाई दुरुस्त रूपमा अभ्यास गर्न अनि परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप हुन, सम्पूर्ण रूपले परमेश्‍वरको अभिप्राय अनुरूप कार्य गर्न, र आफ्ना दृष्टिकोणहरू र कल्पनाहरू त्याग्‍न सके। यसरी, पत्रुस परमेश्‍वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गरे। यी कुराहरू गरेको हुनाले नै मुख्य रूपमा पत्रुसको सेवा परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप हुन गयो।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६८
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५६९
मानिसहरूसँग आफ्नै प्रकृतिको बारेमा अति नै सतही बुझाइ हुन्छ, र यो अनि परमेश्‍वरको न्याय र प्रकाशका वचनहरूका बीचमा ठूलो भिन्नता हुन्छ। यो परमेश्‍वरले प्रकट गर्नुहुने कुरामा हुने गल्ती होइन, बरु आफ्नै प्रकृतिको बारेमा मानिसमा रहेको बुझाइको कमी हो। मानिसहरूमा आफ्नै बारेमा आधारभूत वा आवश्यक बुझाइ छैन; यसको सट्टामा, तिनीहरूले आफ्ना कार्यहरू र बाहिरी अभिव्यक्तिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् र आफ्नो सामर्थ्य खर्चन्छन्। यदि कहिलेकहीँ कसैले आफैलाई बुझेको विषयमा केही भन्छ भने पनि त्यो त्यत्ति धेरै गहन हुँदैन। तिनीहरूले यस प्रकारको कार्य गरेकोले वा कुनै कुरा प्रकट गरेको हुनाले, तिनीहरू यस प्रकारको व्यक्ति भएका हुन् वा तिनीहरूमा यस प्रकारको प्रकृति छ भनी कहिल्यै कसैले सोचेको छैन। परमेश्‍वरले मानवजातिको प्रकृति र सार प्रकट गर्नुभएको छ, तर मानिसले तिनीहरूका काम गर्ने र बोल्ने तरिका त्रुटिपूर्ण र दोषपूर्ण छ भनी बुझ्छ; त्यसकारण, मानिसहरूका निम्ति सत्यको अभ्यास गर्नु सबैभन्दा कठिन काम हुन्छ। मानिसहरूले तिनीहरूका गल्तीहरू तिनीहरूको प्रकृतिको प्रकटीकरण नभएर लापरवाहीसाथ प्रकट हुने क्षणिक अभिव्यक्तिहरू मात्रै हुन् भनी सोच्छन्। यसरी विचार गर्ने मानिसहरूले सत्यको अभ्यास गर्न सक्दैनन्, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई सत्यकै रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनन् र सत्यको तृष्णा गर्दैनन्; त्यसकारण, सत्यको अभ्यास गर्दा तिनीहरूले लापरवाहीको साथ मात्रै नियमहरू पालन गर्छन्। मानिसहरू तिनीहरूका आफ्नै प्रकृतिलाई अत्यन्त भ्रष्ट भएको ठान्दैनन्, र तिनीहरू नाश पार्नु वा दण्ड दिनु पर्ने सम्मको खराब छैनन् भनी विश्‍वास गर्छन्। तिनीहरूले कहिलेकहीँ झूटो बोल्नु कुनै ठूलो कुरा होइन भनी सोच्छन्, र आफूलाई पहिलेको भन्दा धेरै असल ठान्छन्; तापनि, वास्तवमा, तिनीहरू मापदण्डको छेउसम्म पनि पुगेका हुँदैनन्, किनकि मानिसहरूले साँच्चै सत्यताको अभ्यास नगरेको बेला सत्यलाई बाहिरी रूपमा उल्लङ्घन नगर्ने केही कार्यहरू मात्र तिनीहरूसँग हुन्छ।
व्यक्तिको व्यवहार वा आचरणमा हुने परिवर्तनले तिनीहरूको प्रकृतिमा भएको परिवर्तनलाई जनाउँदैन। यसको कारणको के हो भने, व्यक्तिको आचरणले उनीहरूको मौलिक रूपरङ्गलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, न त यसले तिनीहरूको प्रकृतिलाई बदल्न सक्दछ। व्यक्तिले आफ्नो प्रकृतिलाई जानेपछि मात्र उनीहरूको अभ्यास गहन हुन र त्यो कुरा बन्‍न सक्छ, जुन नियमहरूको पालना मात्र हुँदैन। मानिसले वर्तमानमा गर्ने सत्यताको अभ्यास अहिले पनि मापदण्डअनुसारको छैन, र चाहिए जति सबै सत्यता हासिल गर्न सक्दैन। मानिसहरूले सत्यताको केही भाग मात्र अभ्यास गर्छन्, र उनीहरूले उनीहरू केही अवस्था र परिस्थितिहरूमा हुँदा मात्रै त्यसो गर्छन्; उनीहरूले सबै अवस्था र सबै परिस्थितिहरूमा सत्यताको अभ्यास गर्न सक्दैनन्। जब कुनै अवसरमा व्यक्ति खुसी हुन्छ र उनीहरूको स्थिति राम्रो हुन्छ, वा जब उनीहरूले समूहमा सङ्गति गरिरहेका हुन्छन्, र सधैँभन्दा बढी स्वतन्त्र महसुस गर्छन्, त्यसबेला उनीहरूले अस्थायी रूपमा सत्यतासँग मेल खाने केही कुराहरू गर्न सक्छन्; तापनि जब उनीहरू नकारात्मक र सत्यताको पछि नलाग्ने मानिसहरूको साथमा हुन्छन्, उनीहरूको अभ्यास खराब हुन्छ, र उनीहरूको कार्य केही हदसम्म अनुचित हुन्छ। यसको कारण के हो भने मानिसहरूले दृढताको आचरणविना नै सत्यताको अभ्यास गर्दछन्, बरु तिनीहरू भावना वा परिस्थितिको क्षणिक प्रभावहरूद्वारा निर्देशित भएर यसको अभ्यास गर्छन्। यसको कारण यो पनि हो कि तैंले आफ्नो अवस्थालाई बुझेको छैनस्, र तैंले आफ्नो प्रकृतिलाई पनि बुझेको छैनस्, त्यसैले कहिलेकहीँ तैँले कल्‍पना नै गर्न नसकेका कुराहरू गर्न सक्छस्। तैंले आफ्नो केही स्थितिलाई मात्र जान्दछस्, तर तैंले आफ्नो प्रकृतिलाई नबुझेको हुनाले, तैँले भविष्यमा जे गर्न सक्छस् तैँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनस्—अर्थात्, तँ पूर्ण दृढतासाथ खडा हुनेछस् भन्ने कुनै निश्‍चयता छैन। कहिलेकहीँ यस्तो समय हुन्छ जब तँ एउटा स्थितिमा हुन्छस् र तैँले सत्यताको अभ्यास गर्न सक्छस्, र तैंले केही परिवर्तन देखाउन सक्छस् भन्‍ने देखिन्छ, तैपनि, फरक वातावरणमा, तैँले त्यसलाई अभ्यास गर्न सक्दैनस्। यो तेरो नियन्त्रणदेखि बाहिर हुन्छ। कहिलेकहीँ तैँले सत्यताको अभ्यास गर्न सक्छस्, र कहिलेकहीँ सक्दैनस्। एक पल तँ बुझ्छस्, र अर्को क्षण तँ भ्रमित हुन्छस्। वर्तमानमा, तैंले केही नराम्रो गरिरहेको छैनस्, तर सायद तैँले केही समयपछि यसो गर्नेछस्। यसले के प्रमाणित गर्दछ भने, तँभित्र अझै पनि भ्रष्ट थोकहरू छन्, र यदि तैँले साँचो आत्म-ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनस् भने, तिनलाई समाधान गर्न सजिलो हुनेछैन। यदि तैंले आफ्नै भ्रष्ट स्वभावको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनस् भने, र आखिरमा परमेश्‍वरको विरोध हुने कुराहरू गर्न सक्षम हुन्छस् भने, तँ खतरामा छस्। यदि तैंले आफ्नो प्रकृतिलाई छेदन गर्ने र त्यसलाई घृणा गर्ने अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छस् भने, तैँले आफैलाई नियन्त्रण गर्न, आफैलाई त्याग्न, र सत्यतालाई अभ्यास गर्न सक्नेछस्।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “आफ्‍नो प्रकृति बुझ्नु र सत्यको अभ्यास गर्नु” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७०
सत्यताको बारेमा स्पष्ट सङ्गति गर्नुको उद्देश्य मानिसहरूलाई सत्यको अभ्यास गर्न र उनीहरूको स्वभाव बदल्न लगाउनु हो; उनीहरूलाई यसबारे बुझाउनु मात्र होइन। यदि तँ सत्यतालाई बुझ्छस् तर त्यो अभ्यास गर्दैनस् भने, त्यसको बारेमा सङ्गति गर्नु र त्यसको बारेमा रहेको तेरो बुझाइको कुनै अर्थ हुँदैन। यदि तँ सत्यतालाई बुझ्छस्, तर त्यसलाई अभ्यास गर्दैनस् भने, तैँले त्यो प्राप्त गर्ने मौका, साथै मुक्ति पाउने कुनै पनि मौका समेत गुमाउनेछस्। यदि तैंले आफूले बुझेको सत्यतालाई अभ्यास गर्छस् भने, तैँले अझ धेरै, गहिरा सत्यताहरू प्राप्त गर्नेछस्; तैंले परमेश्‍वरको मुक्ति, साथसाथै पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि, प्रकाश, र मार्गदर्शन प्राप्त गर्नेछस्। धेरै जनाले पवित्र आत्माले उनीहरूलाई कहिल्यै ज्ञान दिनुहुन्न भनेर गुनासो मात्रै गर्छन्, तर उनीहरूले सत्यतालाई अभ्यास गरेका छैनन् भन्‍ने कुरालाई कहिल्यै पनि महसुस गर्दैनन्। त्यसकारण, उनीहरूको स्थितिले कहिल्यै सामान्यता प्राप्त गर्नेछैन, न त उनीहरूले कहिल्यै परमेश्‍वरको इच्छा नै बुझ्नेछन्।
केही मानिसहरूले के भन्छन् भने सत्यताको अभ्यास गरेर यसले उनीहरूका समस्याहरू समाधान हुँदैनन्। अरूले चाहिँ सत्यताले व्यक्तिको भ्रष्ट स्वभावलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सक्दैन भनी विश्‍वास गर्छन्। वास्तविकता के हो भने मानिसहरूका सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ; मुख्य कुरा भनेको उनीहरूले सत्यअनुसार कार्य गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नै हो। वर्तमानमा तिमीहरूमा व्याप्त महामारी भनेका क्यान्सर वा निको नहुने रोगहरू होइनन्। यदि तिमीहरूले सत्यताको अभ्यास गर्न सक्छौ भने, ती सबै दोषहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर यो कुरा तिमीहरूले सत्यअनुसार काम गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि तँ सत्यको पछि लाग्‍ने मार्गमा हिंड्दैछस् भने, तँ सफल हुने दिशातिर बढ्दैछस्; तैपनि, यदि तँ गलत मार्गमा छस् भने तँ नाश हुन्छस्। उदाहरणको लागि, कतिपय मानिसहरूले परमेश्‍वरको भवनलाई फाइदा हुने गरी कसरी काम गर्न सक्छन् वा उनीहरूको काम गर्ने तरिका परमेश्‍वरको इच्छासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्‍ने सोचविचार नगरी आफ्नो काम गर्छन्; फलस्वरूप, उनीहरूले यस्ता धेरै कुरा गर्छन् जसलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। यदि उनीहरूले गर्ने सबै काममा तिनीहरूले सत्यताअनुरूप काम गर्ने हो भने, के उनीहरू परमेश्‍वरको हृदय अनुसारका मानिसहरू हुँदैनन् र? कतिपय मानिसहरूले सत्यतालाई जान्दछन् तर सत्यता यो एउटा कुरा मात्र हो त्योभन्दा बढी अरू केही होइन भनी विश्‍वास गर्दै त्यसलाई अभ्यास गर्दैनन्। उनीहरू यसले उनीहरूका आफ्नै इच्छालाई शुद्ध पार्न सक्दैन र उनीहरूका भ्रष्टताको समाधान गर्न सक्दैन भन्‍ने विश्‍वास गर्दछ। के यस प्रकारको व्यक्ति हाँसउठ्दो होइन र? के त्यस्ता व्यक्तिहरू मूर्ख होइनन् र? के उनीहरूले आफूलाई बुद्धिमान् ठान्दैनन् र? यदि मानिसहरूले सत्यताअनुसार काम गरे भने, उनीहरूको भ्रष्ट स्वभाव परिवर्तन हुनेछ; तापनि, यदि उनीहरू परमेश्‍वरमाथिको आफ्नो विश्‍वास र सेवा आफ्नो प्राकृतिक व्यक्तित्वहरूमा आधारित गर्छन् भने, उनीहरूमध्ये कोही पनि आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न सफल हुँदैनन्। कतिपय मानिसहरू दिनभरि आफ्नै चासोका विषयमा व्यस्त हुन्छन्, अनि सजिलै पाउन सकिने सत्यताको खोजी वा अभ्यास गर्न असफल हुन्छन्। अभ्यास गर्ने यो तरिका अत्यन्तै हास्यास्पद छ; त्यस्ता मानिसहरू अन्तर्निहित रूपमा नै पीडितहरू हुन्, किनकि उनीहरूसँग आशिष् त हुन्छ तर तिनीहरूले ती उपभोग गर्दैनन्! अगाडि बढ्ने बाटो छ; यसका निम्ति तैंले अभ्यास मात्र गर्नुपर्छ। यदि तैँले सत्यको अभ्यास गर्ने दृढ संकल्‍प गरेको छस् भने, तेरा कमजोरीहरू र घातक त्रुटिहरू बदलिन सक्छन्। तापनि, तँ सधैँ होसियार र बुद्धिमान् हुनुपर्छ र तैँले धेरै कठिनाइ भोग्नुपर्दछ। विश्‍वास प्राप्त गर्नका निम्ति बुद्धि चाहिन्छ। यदि तैँले लापरवाही व्यवहार अपनाउँछस् भने, के तैँले परमेश्‍वरमा ठीक तरिकाले विश्‍वास गर्न सक्छस्?
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “सत्यतालाई प्रेम गर्नेहरूसित अगाडि बढ्ने एउटा मार्ग हुन्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७१
यदि तँ परमेश्‍वरका वचनहरूबाट परमेश्‍वरको इच्छा र उहाँको वाणीहरू पछाडिको अभिप्रायहरूलाई बुझ्दैनस् भने, यदि तँ उहाँका वचनहरूले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य र परिणामहरूलाई बुझ्दैनस् भने, यदि तँ उहाँका वचनहरूले मानिसमा के हासिल गर्न र सिद्ध बनाउन खोजेको हो भनी बुझ्दैनस् भने, यदि तँ यी कुराहरूलाई बुझ्दैनस् भने, यसले तैंले सत्यतालाई बुझेको छैनस् भन्‍ने प्रमाणित गर्छ। परमेश्‍वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो किन भन्नुहुन्छ? उहाँ किन त्यस्तो शैलीमा बोल्नुहुन्छ? उहाँ आफूले बोल्ने हरेक शब्दमा किन त्यत्ति गम्भीर र इमानदार हुनुहुन्छ? किन उहाँले निश्‍चित शब्दहरूको प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ? के तँलाई थाहा छ? यदि तँ निश्चित रूपमा भन्न सक्दैनस् भने, त्यसको अर्थ तैंले परमेश्‍वरको इच्छा वा उहाँको उद्देश्यलाई बुझेको छैनस् र तैंले उहाँका वचनहरू पछाडिको प्रसंगलाई बुझेको छैनस् भन्ने हुन्छ। यदि तैंले यो कुरा बुझेको छैनस् भने, तैँले कसरी सत्यता प्राप्त गर्न सक्छस्? सत्यता प्राप्त गर्नु भनेको परमेश्‍वरले भन्नुहुने हरेक शब्दबाट उहाँको अर्थ बुझ्नु हो; यसको अर्थ तैंले परमेश्‍वरका वचनहरू बुझेपछि त्यसलाई अभ्यास गर्न सक्‍नु हो, यसरी तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा जिउन सक्छस् र त्यो तेरो वास्तविकता बन्दछ। जब तँमा परमेश्‍वरको वचनको पूर्ण ज्ञान हुन्छ तब मात्र तैंले सत्यतालाई बुझ्न सक्छस्। केही अक्षरहरू र धर्म-सिद्धान्तहरू मात्रै बुझेपछि, तैँले सत्यलाई बुझेको छस् र तँमा वास्तविकता छ भन्‍ने तँलाई लाग्छ। तँ यसो पनि भन्छस्, “परमेश्‍वरले हामी इमानदार भएको चाहनुहुन्छ र हामीले यसलाई अभ्यास गरेका छौं।” तापनि, परमेश्‍वरले कुन कारणले मानिसहरू इमानदार होस् भनी चाहनुहुन्छ र किन मानिसहरूले उहाँलाई प्रेम गरून् भन्‍ने उहाँ चाहनुहुन्छ त्यसलाई तँ बुझ्न सक्दैनस्। वास्तवमा, मानिसहरूमा मुक्ति र सिद्धता ल्याउने उद्देश्यले नै परमेश्‍वरले तिनीहरूबाट यस्तो माग गर्नुभएको हो।
सत्यको तिर्सना गर्ने, सत्यको खोजी गर्ने, र सत्यलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूका निम्ति परमेश्‍वरले सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ। आफैलाई अक्षरहरू र सिद्धान्तहरूसित सम्बन्धित तुल्याउने र लामो, आडम्बरी भाषणहरू दिन मन पराउनेहरूका विषयमा भन्दा, तिनीहरूले कहिल्यै पनि सत्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन्; तिनीहरूले आफैलाई मूर्ख बनाइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरूमा परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्ने विषयमा गलत दृष्टिकोण हुन्छ; जुन कुरा सोझो छ त्यो पढ्न तिनीहरू आफ्नो मुन्टो बटार्छन्—तिनीहरूका सबै दृष्टिकोण गलत हुन्छ। केही मानिसहरू आशिषित हुने र मानिसको गन्तव्यको बारेमा परमेश्‍वरले भन्नुभएका कुराहरू अध्ययन गर्दै उहाँको वचनको अनुसन्धान गर्न मात्र जान्दछन्। यदि परमेश्‍वरका वचनहरू तिनीहरूको धारणासँग मिलेन भने, तिनीहरू नकारात्मक बन्छन् र तिनीहरूको खोजीलाई रोक्छन्। यसले तिनीहरूले सत्यताप्रति कुनै चासो राख्दैनन् भन्‍ने देखाउँदछ। फलस्वरूप, तिनीहरूले सत्यतालाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्; तिनीहरू आफ्नै धारणा र कल्पनाको सत्यतालाई मात्र स्वीकार गर्न सक्छन्। यस्ता मानिसहरू परमेश्‍वरमाथिको आफ्नो विश्‍वासमा उत्साही भए पनि र तिनीहरूले हरप्रकारले आफूले सक्दो केही असल कामहरू गर्ने र अरूको अगाडि आफूलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे पनि तिनीहरूले भविष्यमा राम्रो गन्तव्य पाउनका लागि मात्र त्यसो गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू पनि मण्डली जीवनमा सामेल हुन्छन्, अरू सबैले जस्तै परमेश्‍वरका वचनहरू खाइरहेका र पिइरहेका हुन्छन्, तैपनि तिनीहरूलाई सत्यको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न र सत्य प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ। अझै अरू हुन्छन्, जसले परमेश्‍वरका वचनहरू खान्छन् र पिउँछन्, तर तिनीहरू केवल झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेका हुन्छन्; आफूले केही अक्षरहरू र सिद्धान्तहरू बुझेर नै तिनीहरूले सत्य प्राप्त गरेका छौ भनी सोच्छन्। तिनीहरू कति मूर्ख छन्! परमेश्‍वरको वचन नै सत्यता हो। तापनि, परमेश्‍वरको वचन पढेपछि तैँले सत्यतालाई बुझ्नेछस् र सत्यता प्राप्त गर्नेछस् भन्ने हुँदैन। यदि परमेश्‍वरका वचनहरू खाएर अनि पिएर तैँले सत्यता प्राप्त गर्न सेकिनस् भने, तैँले प्राप्त गर्ने कुरा भनेको अक्षरहरू र सिद्धान्तहरू मात्र हुनेछ। सत्य प्राप्त गर्नु भनेको के हो त्यो तिमीलाई थाहा हुँदैन। तैँले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई आफ्‍ना हतकेलामा राख्न सक्छस्, तर ती पढेपछि तैँले अझै पनि परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्न सक्दैनस् भने तैँले केही अक्षरहरू र सिद्धान्तहरू मात्र प्राप्त गर्छस्। सबैभन्दा पहिले, परमेश्‍वरको वचन त्यति सीधा छैन भन्‍ने तैँले बुझ्‍नुपर्छ; परमेश्‍वरको वचन पूर्ण रूपमा गहन छ। धेरै वर्षको अनुभवविना, तैँले परमेश्‍वरको वचन बुझ्न कसरी सम्‍भव हुन्छ र? परमेश्‍वरको वचनको एउटा वाक्यको पूर्ण अनुभव गर्नको लागि समे तँलाई जीवनभरिको समय आवश्यक हुनेछ। तैँले परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्छस्, तर तैँले परमेश्‍वरको इच्छालाई बुझ्दैनस्; तैँले उहाँका वचनहरूका अभिप्रायहरू, तिनको उत्पत्ति, तिनले हासिल गर्न खोजेका प्रभाव, वा तिनले के सम्पन्न गर्न चाहन्छ त्यो बुझ्दैनस्। यदि तैँले यी कुनै पनि कुरा बुझ्दैनस् भने, सत्यतालाई तैँले कसरी बुझ्न सक्छस्? तैँले परमेश्‍वरका वचनहरू धेरै पटक पढेका हुन सक्छस्, र सायद तैँले धेरै वटा खण्ड मुखस्त भन्न सक्छस् होला, तैपनि तँ अझै परिवर्तन भएका छैनस्, न त तैँले कुनै प्रगति नै गरेको छस्। परमेश्‍वरसँगको तेरो सम्बन्ध सधैँको जस्तै टाढा र अलग छ। पहिले जस्तै तँ र परमेश्‍वरको बीचमा अझै बाधाहरू छन्, र तँ अझै पनि उहाँप्रति शङ्कालु छस्। तैँले परमेश्‍वरलाई नबुझेको मात्र होइन, तर तैँले उहाँसँग बहानाहरू बनाउँछस् र उहाँको बारेमा धारणाहरू राख्छस्। तैँले उहाँको विरोध गर्छस् र उहाँको निन्दा समेत गर्छस्। यसको अर्थ तैँले सत्यता प्राप्त गरेको छस् भन्ने कसरी हुनसक्छ?
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “केवल सत्य वास्तविकता हुनेहरूले नेतृत्व गर्न सक्छन्” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७२
तेरो संकल्पलाई हल्लाउन सक्‍ने, तेरो हृदयलाई ओगट्न सक्‍ने, वा तँलाई तेरो कर्तव्य पूरा गर्न र तेरो अगाडिको प्रगतिलाई रोक्न सक्‍ने हरेक दिन पैदा हुने, साना-ठूला सबै कुरालाई लगनशीलताको साथ ध्यान दिनुपर्छ; तिनलाई होसियारीसाथ जाँच्नुपर्छ र तिनका सत्यताको खोजी गरिनुपर्छ। यी सबै अनुभवको दायराभित्र देखा पर्ने कुराहरू हुन्। कतिपय मानिसहरूले आफूमाथि नकरात्मक अवस्था आइपर्दा आफ्ना कर्तव्यहरूलाई त्याग्छन् र प्रत्येक बाधापछि तिनीहरू खडा हुन असमर्थ हुन्छन्। यी सबै मानिसहरू सत्यतालाई प्रेम नगर्ने मूर्खहरू हुन्, र जीवनभरि विश्‍वास गरे पनि उनीहरूले सत्यता प्राप्त गर्दैनन्। त्यस्ता मूर्खहरूले कसरी आखिरीसम्म पछ्याउन सक्छन्? यदि तेरो जीवनमा एउटै कुरा दस पटक देखा पर्छ, तर त्यसबाट तैंले केही पनि प्राप्त गर्दैनस् भने, तँ मामुली, बेकम्मा व्यक्ति होस्। आत्मिक कुराहरू बुझ्ने बाठो र साँचो योग्यता भएका मानिसहरू सत्यताको खोजी गर्नेहरू हुन्; उनीहरूलाई दस पटक केही भयो भने, सायद तीमध्ये आठ वटा अवस्थामा, तिनीहरूले केही प्रेरणा प्राप्त गर्न, केही पाठ सिक्न, केही ज्ञान प्राप्त गर्न अनि केही उन्नति गर्न सक्नेछन्। आत्मिक कुराहरू नबुझ्ने कुनै मूर्ख व्यक्तिमाथि जब दस पटक केही परिआउँछ, त्यसले एकै पल्ट पनि उनीहरूको जीवनमा फाइदा गर्दैन, एकै पल्ट पनि त्यसले तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्दैन, र त्यसले एकै पटक पनि उनीहरूलाई आफ्नो प्रकृति बुझ्ने बनाउँदैन, र त्यो उनीहरूका लागि अन्त्य हुन्छ। प्रत्येक चोटि जब उनीहरूलाई केही हुन्छ, तिनीहरू ढल्छन्, र प्रत्येक चोटि तिनीहरू ढल्दा उनीहरूलाई सहायता गर्न र उत्साह दिनका लागि तिनीहरूलाई अरू कसैको खाँचो हुन्छ; सहायता र उत्साह नगरी उनीहरू उठ्न सक्दैनन्। प्रत्येक चोटि केही हुँदा, यदि उनीहरू पतन हुने खतरामा हुन्छन् भने, र यदि प्रत्येक पटक उनीहरू अपमानित हुने खतरामा पर्दछन् भने, के यो उनीहरूका लागि अन्त्य होइन र? के यस्ता बेकम्मा मानिसहरू मुक्ति दिने अरू कुनै आधारहरू छन्? परमेश्‍वरले मानवजातिलाई दिनुभएको मुक्ति, सत्यतालाई प्रेम गर्नेहरूको मुक्ति हो, तिनीहरूको इच्छा र संकल्प सहितको भागको मुक्ति हो, र तिनीहरूको हृदयको त्यो भागको मुक्ति हो जसले सत्यता र धार्मिकताको निम्ति तिर्सना गर्छ। व्यक्तिको संकल्प भनेको तिनीहरूको हृदयमा भएको त्यस्तो भाग हो जसले धार्मिकता, भलाइ र सत्यताको ज्यादै तिर्सना गर्छ, र जसमा विवेक हुन्छ। परमेश्‍वरले मानिसहरूको यस भागलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, र यसमार्फत, उहाँले उनीहरूको भ्रष्ट स्वभावलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, यसैले कि उनीहरूले सत्यतालाई बुझ्न र प्राप्त गर्न सकून्, यसैले कि उनीहरूको भ्रष्टता पखालिओस् र उनीहरूको जीवन स्वभाव रूपान्तरण होस्। यदि तँभित्र यी कुराहरू छैनन् भने, तैँले मुक्ति पाउन सक्दैनस्। यदि तँभित्र सत्यताप्रति कुनै प्रेम वा धार्मिकता र ज्योतिप्रतिको कुनै आकांक्षा छैन भने; यदि तैँले दुष्टताको सामना गर्नुपर्दछ, तँमा खराब कुराहरूलाई त्याग्ने इच्छा पनि हुँदैन, र कठिनाइ सहने दृढ संकल्प पनि हुँदैन भने; यसबाहेक, यदि तेरो विवेक अचेत छ भने; यदि सत्यतालाई ग्रहण गर्ने तेरो क्षमता पनि अचेत छ, र तँ सत्यता र उत्पन्न हुने घटनाहरूप्रति असचेत छस्; र यदि तँ सबै कुरामा अनजान छस्, र तैँले आफ्नै प्रयासमा परिस्थितिहरूको सामना वा समाधान गर्न सक्दैनस् भने, तैँले मुक्ति पाउने कुनै उपाय छैन। त्यस्ता व्यक्तिसँग सिफारिस गर्ने केही पनि हुँदैन, काम गर्न लायकको केही पनि हुँदैन। उनीहरूको अन्तस्करण मन्द हुन्छ, उनीहरूको दिमाग धमिलिएको हुन्छ, र उनीहरूले सत्यतालाई प्रेम गर्दैनन्, न त उनीहरूले आफ्‍नो हृदयको गहिराइमा धार्मिकताको तृष्णा गर्दछन्, र परमेश्‍वरले जतिसुकै स्पष्ट वा पारदर्शी रूपमा सत्यता बोल्नुभए पनि, उनीहरूले प्रतिक्रिया दिँदैनन्, मानौं उनीहरू पहिले नै मरिसकेका छन्। के उनीहरूका लागि काम-कुराहरू सकिएका हुँदैनन् र? थोरै सास बाँकी रहेको व्यक्तिलाई कृत्रिम स्वास-प्रस्वासद्वारा बचाउन सकिन्छ, तर यदि उनीहरू मरिसकेका छन् र उनीहरूका प्राण निस्केर गइसकेका छन् भने कृत्रिम स्वास-प्रस्वासले केही काम गर्दैन। यदि तैंले कुनै समस्याको सामना गर्दा, तँ त्यसबाट पछि हट्छस् र त्यसबाट बच्ने कोसिस गर्छस् भने, त्यसको अर्थ तैंले साक्षी धारण गरेको छैनस् भन्ने हुन्छ; त्यसरी तैँले कहिल्यै पनि मुक्ति पाउन सक्दैनस्, र तँ पूर्ण रूपमा हटाइनेछस्। जब तँमाथि समस्या आइपर्छ, तेरो दिमाग ठन्डा र सही दृष्टिकोण हुनुपर्छ, र तैंले एउटा निर्णय गर्नैपर्छ। तिमीहरूले समस्या समाधान गर्नको लागि सत्यताको प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। सामान्य समयमा, केही सत्य बुझेर के नै पो हुन्छ र? यो तेरो पेट भर्नका निम्ति होइन, र यो तँलाई भन्न पर्ने केही कुराहरू दिनका निम्ति मात्र होइन, न त यो अरूका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति नै हो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसको प्रयोग भनेको तेरा आफ्नै समस्याहरू, तेरा आफ्नै कठिनाइहरू समाधान गर्नका निम्ति हो—तैंले आफ्नै कठिनाइहरूलाई समाधान गरेपछि मात्र तैँले अरूका कठिनाइहरूलाई समाधान गर्न सक्छस्। पत्रुस एउटा फल हुन् भनी किन भनिन्छ? किनकि तिनमा केही मूल्यवान्, सिद्ध पारिन लायकका थोकहरू छन्; तिनी सत्यताको खोजी गर्न कटिबद्ध र इच्छुक थिए; तिनीसँग तर्कशक्ति थियो, तिनी कठिनाइ भोग्न इच्छुक थिए, र तिनले आफ्नो हृदयले सत्यतालाई प्रेम गर्थे, र तिनले हुनआएका कुनै पनि कुरालाई त्यसै जान दिँदैनथिए। यी सबै बलिया पक्षहरू हुन्। यदि तँसित यी कुनै पनि बलिया पक्षहरू छैनन् भने, त्यसको अर्थ समस्या हो। तँ अनुभव गर्न असमर्थ छस् र तँमा एउटै पनि अनुभव छैन, र तैँले अरूका कठिनाइहरू समाधान गर्न सक्दैनस्। किनकि कसरी प्रवेश गर्ने भन्‍ने तँलाई थाहा छैन। तँमाथि केही कुराहरू भइपरिआउँदा तँ अलमल्ल पर्छस्; तँ व्याकुल हुन्छस्, रुन्छस्, नकारात्मक बन्छस्, भाग्छस्, र तैंले जे गरे पनि ती ठीकसँग सम्हाल्न सक्दैनस्।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “अलमल्‍ल परेका मानिसहरूलाई मुक्ति दिन सकिँदैन” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७३
तैँले जेसुकै गरे पनि, सबैभन्दा पहिले तैँले त्यो कार्य किन गर्दैछस्, त्यो कार्य गर्न तँलाई कुन अभिप्रायले निर्देशित गर्छ, तैँले त्यो कार्य गर्नुको महत्त्व के छ, त्यो मामलाको प्रकृति के-कस्तो छ, अनि तैँले गरिरहेको त्यो कार्य सकारात्मक कुरा हो कि नकारात्मक कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तँलाई यी सबै कुराहरूको बारेमा स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्छ; सिद्धान्त सहित कार्य गर्न सक्‍नको लागि यो एकदमै जरुरी छ। यदि तैँले तेरो कर्तव्य पूरा गर्नको लागि केही गर्दैछस् भने तैँले विचार-विमर्श गर्नुपर्छ: मैले यो कार्य कसरी गर्नुपर्छ? मैले कसरी मेरो कर्तव्य राम्रोसँग पूरा गर्नुपर्छ ताकि मैले त्यो कार्य झारो टार्नको लागि मात्र नगरूँ? तँ यो मामलामा परमेश्‍वरको नजिक आउनुपर्छ। परमेश्‍वरको नजिक जानु भनेको यो मामलामा सत्यताको खोजी गर्नु हो, अभ्यास गर्ने बाटो खोज्नु हो, परमेश्‍वरको इच्छाको खोजी गर्नु हो, अनि परमेश्‍वरलाई कसरी खुशी तुल्याउने सो कुराको खोजी गर्नु हो। तैँले गर्ने हरेक कुरामा परमेश्‍वरको नजिक जानु भनेको यसरी नै हो। यसमा कुनै धार्मिक समारोहको आयोजना गर्नु वा कुनै बाह्य रूपमै देखिने कार्य गर्नु पर्दैन। यो कार्य परमेश्‍वरको इच्छाको खोजीपश्चात सत्यता अनुरूप अभ्यास गर्ने उद्देश्यको लागि गरिन्छ। यदि तँ सधैँ केही पनि नगरेको अवस्थामा “धन्यवाद परमेश्‍वर” भनी भन्छस्, तर जब तैँले केही गरिरहेको हुन्छस् तब आफूलाई जुन शैलीमा मन लाग्यो त्यही शैलीमा निरन्तर गर्छस् भने यस प्रकारको धन्यवाद केवल बाह्य रूपमा देखाउने कार्य हुन्छ। जब तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको हुन्छस् वा कुनै कुरामा कार्य गरिरहेको हुन्छस्, तब तैले सधैँ सोच्नुपर्छ: कसरी मैले यो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ? परमेश्‍वरको इच्छा के हो? यो तैँले जे गर्छस् सो कार्यमार्फत तँ परमेश्‍वरको नजिक जानको लागि अनि त्यसो गर्दा तैँले तेरो कार्यपछाडिका सिद्धान्तहरू र सत्यताको साथसाथै परमेश्‍वरको इच्छाको खोजी गर्नको लागि र तैँले गर्ने सबै कार्यमा परमेश्‍वरबाट टाढा नजानको लागि हो। त्यस्तो व्यक्तिले मात्र सच्चा रूपमा परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छ। आजभोली, जब-जब मानिसहरू कुनै कुराको सामु आउँछन्, तब-तब, वास्तविक अवस्था जे-जस्तो भए पनि, तिनीहरूले यो र त्यो गर्न सक्छु भनी सोच्छन्, त्यसैले तिनीहरूका हृदयमा परमेश्‍वर हुँदैन, अनि तिनीहरूले त्यो कार्य तिनीहरूको आफ्नै इच्छाअनुसार गर्छन्। तिनीहरूको कार्यशैली उचित भए पनि नभए पनि, वा त्यो सत्यता अनुरूप भए पनि नभए पनि, तिनीहरू ढिठ गर्दै अघि बढ्छन् र आफ्नै व्यक्तिगत अभिप्रायहरू अनुसार कार्य गर्छन्। सामान्यतया तिनीहरूका हृदयमा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भन्‍ने जस्तो पनि देखिन्छ तर जब तिनीहरूले कार्य गर्छन् तब तिनीहरूका हृदयमा परमेश्‍वर हुँदैन। केही मानिसहरूले भन्छन्, “मैले गर्ने कुराहरूमा म परमेश्‍वरको नजिक जानै सक्दिनँ। विगतमा मलाई धार्मिक समारोहहरू आयोजना गर्ने बानी थियो, र मैले परमेश्‍वरको नजिक जाने कोसिस गरेँ, तर यो प्रयास व्यर्थ भयो। म उहाँको नजिक जानै सकिनँ।” त्यस्ता मानिसहरूको हृदयमा परमेश्‍वर हुँदैन; तिनीहरूका हृदयमा तिनीहरू आफै हुन्छन्, अनि तिनीहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा तिनीहरूले सत्यताको अभ्यास गर्न सक्दै सक्दैनन्। सत्यता अनुरूप कार्य नगर्नु भनेको तिनीहरूका आफ्‍नै इच्छाअनुसार कार्य गर्नु हो, र तिनीहरूका आफ्‍नै इच्छाअनुसार कार्य गर्नु भनेको परमेश्‍वरलाई छाड्नु हो; यसको अर्थ, तिनीहरूका हृदयमा परमेश्‍वर हुनुहुन्न भन्‍ने हुन्छ। मानव विचारहरू मानिसहरूलाई प्रायजसो राम्रो र सही लाग्छ, अनि तिनीहरूले सत्यतालाई त्यति धेरै उल्लंघन नगर्लान् भन्‍ने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो शैलीमा काम गर्नु भनेको सत्यताको अभ्यास गर्नु हो भन्ने मानिसहरू ठान्छन्; त्यस्तो शैलीमा काम गर्नु भनेको परमेश्‍वरमा समर्पित हुनु हो भन्ने तिनीहरू ठान्छन्। वास्तवमा, तिनीहरूले सच्चा रूपमा परमेश्‍वरलाई खोजी गरिरहेका वा प्रार्थना गरिरहेका हुँदैनन् र तिनीहरूले परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न परमेश्‍वरका आवश्यक मापदण्डहरू अनुसार राम्रोसँग यसो गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुँदैनन्। तिनीहरूसित यो सच्चा अवस्था नै छैन, न त तिनीहरूसँग कुनै इच्छा नै छ। मानिसहरूले तिनीहरूको अभ्यासमा गर्ने सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो। तैँले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस्, तर तैँले आफ्नो हृदयमा परमेश्‍वरलाई राख्दैनस्। यो कसरी पाप हुन सक्दैन र? के तैँले आफैलाई धोका दिइरहेको छैनस् र? यदि यस्तै शैलीमै विश्‍वास गरिरहन्छस् भने तैँले कस्ता किसिमका प्रभावहरू हासिल गर्न सक्छस् र? अझ भन्ने हो भने, कसरी विश्‍वासको महत्त्व प्रकटीकरण हुन सक्छ र?
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “परमेश्‍वरको इच्छाको खोजी गर्नु भनेको सत्यता अभ्यासको लागि हो” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७४
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७५
तैंले पूरा गर्ने कुनै पनि कर्तव्यमा जीवन प्रवेश सामेल हुन्छ। तेरो कर्तव्य नियमित वा अनियमित, सुस्त वा जीवन्त जस्तोसुकै भए पनि, तैंले सधैँ जीवन प्रवेश प्राप्त गर्नैपर्छ। कतिपय मानिसहरूले पूरा गर्ने कर्तव्यहरू झमेलामय हुन्छन्; तिनीहरू प्रत्येक दिन उस्तै काम गर्छन्। तापनि, ती कर्तव्यहरू पूरा गर्दा, यी मानिसहरूले प्रकट गर्ने अवस्थाहरू एकसमान हुँदैनन्। कहिलेकहीँ, राम्रो मनस्थितिमा हुँदा, मानिसहरू अलिक बढी मेहनती हुन्छन् र तिनीहरूले राम्रो काम गर्छन्। अरू बेला, कुनै अज्ञात प्रभावको कारण तिनीहरूको भ्रष्ट शैतानी स्वभावले उनीहरूमा बदमासी जगाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूमा अनुचित दृष्टिकोणहरू पैदा हुन्छन् र खराब अवस्थाहरूमा र खराब मनस्थितिमा हुन्छन्; परिणामस्वरूप उनीहरूले आफ्ना कर्तव्यहरू लापरवाही ढङ्गले गर्दछन्। मानिसहरूको आन्तरिक अवस्था निरन्तर परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्; उनीहरू कुनै पनि ठाउँमा र कुनै पनि समयमा परिवर्तन हुन सक्छन्। तेरो अवस्था जसरी परिवर्तन भए पनि, तेरो मनस्थितिको आधारमा काम गर्नु सधैँ गलत हुन्छ। मानौं, तँ राम्रो मनस्थितिमा हुँदा तैँले अलिक राम्रो काम गर्छस्, र खराब मनस्थितिमा हुँदा अलिक खराब काम गर्छस्—के यो काम-कुरा गर्ने सिद्धान्त अनुरूपको तरिका हो? के तैँले यसरी सन्तोषजनक रूपले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्छस्? मानिसहरूको मनस्थिति जस्तोसुकै भए पनि, उनीहरूले प्रार्थना गर्न र परमेश्‍वरको सामु आफूलाई अनुकूल गर्न, र सत्यताको खोजी गर्न र सिद्धान्त अनुसार काम गर्न जान्नु नै पर्छ; तब मात्र तिनीहरू आफ्नो मनस्थितिद्वारा नियन्त्रित र प्रभावित भएर अगि र पछि हुत्तिनबाट जोगिन सक्छन्। तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा, तैँले सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेको छस् कि छैनस्, कर्तव्य पूरा गर्ने तेरो कार्य मापदण्ड अनुसारको छ कि छैन, तैँले त्यो लापरवाही ढङ्गले गरिरहेको छस् कि छैनस्, तैँले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने कोसिस गरेको छस् कि छैनस्, तेरो आचरण र सोच-विचारको तरिकामा कुनै समस्याहरू छन् कि छैनन् सो हेर्न तैँले आफूलाई सधैँ जाँच्नुपर्छ। तैँले आत्म-चिन्तन गरेर यी कुराहरू तँलाई स्पष्ट भइसकेपछि, तँलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सजिलो हुनेछ। तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको बेला जुनसुकै कुराको सामना गर्न परे पनि—नकारात्मकता र कमजोरी, वा निराकरणपछि खराब मनस्थितिमा भए पनि—तैँले त्यसलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्दछ, र तैँले सत्यको खोजी गर्नुपर्दछ र परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्नुपर्छ। यी कुराहरू गरेर, तैँले अभ्यास गर्ने मार्ग पाउनेछस्। यदि तैँले राम्ररी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न चाहन्छस् भने, तँ आफ्नो मनस्थितिद्वारा प्रभावित हुनु हुँदैन। तैँले जति नै नकारात्मक वा कमजोर महसुस गरिरहेको भए पनि, तैँले गर्ने सबै कुरामा तैँले पूर्ण कडाइका साथ, र सिद्धान्तहरूमा रहेर सत्यको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यदि तँ यसो गर्छस् भने, अन्य मानिसहरूले तँलाई स्वीकार मात्र गर्नेछैनन्, तर परमेश्‍वरले पनि तँलाई मन पराउनुहुनेछ। त्यसरी नै, तँ यस्तो व्यक्ति हुनेछस् जो जिम्मेवार हुन्छ, र जसले आफ्नो काँधमा बोझ लिन्छ; तँ सच्‍चा रूपमा असल व्यक्ति हुनेछस्, जसले वास्तवमा मापदण्ड अनुसार आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्दछ र जो एक सच्‍चा व्यक्तिको स्वरूप लिएर पूर्ण रूपमा जिउँछ। त्यस्ता मानिसहरू शुद्ध पारिएका हुन्छन् र आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्दा वास्तविक रूपान्तरण हासिल गर्छन्, र तिनीहरूलाई परमेश्‍वर नजरमा इमानदार भन्न सकिन्छ। केवल इमानदार मानिसहरू मात्र सत्यको अभ्यासमा दृढ रहन र सिद्धान्तको साथ काम गर्न सफल हुन सक्छन्, र मापदण्डअनुसार आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्न सक्छन्। सिद्धान्तसहित काम गर्ने मानिसहरू राम्रो मनस्थितिमा हुँदा आफ्ना कर्तव्यहरू सावधानीपूर्वक गर्छन्; तिनीहरू लापरवाही तरिकाले काम गर्दैनन्, तिनीहरू अहङ्कारी हुँदैनन्, र अरूले तिनीहरूलाई ठूलो सम्झून् भनी आफ्‍नो धाक लगाउँदैनन्। तापनि, तिनीहरू खराब मनस्थितिमा हुँदा आफ्ना दैनिक कार्यहरू उत्तिकै गम्भीरता र जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्छन्, र तिनीहरूका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न वाधा दिने वा तिनीहरूलाई केही दबाब दिने वा तिनीहरूले आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्दा बाधा उत्पन्न गर्ने कुरा भेटे भने पनि तिनीहरू परमेश्‍वरको सामु आफ्ना हृदयलाई शान्त पार्न सक्छन् र यस भन्दै प्रार्थना गर्न सक्छन्, “मेरो विरुद्धमा जति नै ठूलो समस्या आइपरे पनि—यदि आकाशहरू नै खस्यो भने पनि—जबसम्म परमेश्‍वरले मलाई जीवित रहन दिनुहुन्छ, म मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि सक्दो गर्न प्रतिबद्ध छु। मलाई जिउन दिइने प्रत्येक दिन नै मैले मेरो कर्तव्य पूरा गर्न कठिन परिश्रम गर्ने दिन हो, यसैले कि परमेश्‍वरले मलाई दिनुभएको यो कर्तव्य, साथै उहाँले मेरो शरीरमा हालिदिनुभएको यो सासको योग्य बन्न सकूँ। जतिसुकै कठिनाइमा परे पनि म यी सबैलाई पन्छ्याउनेछु, किनकि मेरो कर्तव्य पूरा गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो!” कुनै व्यक्ति, घटना, थोक, वा वातावरणबाट प्रभावित नहुने मानिसहरू, कुनै मनस्थिति वा बाहिरी परिस्थितिद्वारा नियन्त्रित नहुनेहरू, र जसले परमेश्‍वरले सुम्पिनुभएका तिनीहरूका कर्तव्यहरू र आदेशहरूलाई सबैभन्दा पहिले स्थानमा राख्छन्—तिनीहरू त्यस्ता मानिसहरू हुन् जो परमेश्‍वरप्रति बफादार हुन्छन् र जो सच्‍चा रूपमा उहाँको अधीनमा बस्छन्। यस्ता मानिसहरूले जीवनमा प्रवेश पाएका हुन्छन् र सत्य वास्तविकतामा प्रवेश गरेका हुन्छन्। सत्यतामा जिउनुको सबैभन्दा व्यावहारिक र वास्तविक अभिव्यक्ति यही हो।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गरेको अनुभवद्वारा नै जीवन प्रवेशको सुरुवात हुनुपर्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७६
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “आफ्ना कर्तव्यहरूमा कसरी परमेश्‍वरका वचनहरू अनुभव गर्ने” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७७
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “सत्यताको खोजी गरेर मात्र व्यक्तिले परमेश्‍वरका कार्यहरूलाई जान्न सक्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७८
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “देहधारी परमेश्‍वरलाई कसरी चिन्‍ने” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५७९
अघिल्लो: जीवनमा प्रवेश (५)
अर्को: ११. गन्तव्य र परिणामहरू